Person-Affect-Cognition-Execution (I-PACE) မော်ဒယ်၏စွဲလမ်းစေသောအပြုအမူများအတွက်အပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှု။ အင်တာနက်အသုံးပြုမှုမမှန်ခြင်းများအပြင်စွဲလမ်းစေသည့်အပြုအမူများအားအဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းနှင့်အထွေထွေနှင့်စွဲလမ်းစေသောအပြုအမူများလုပ်ငန်းစဉ်၏သွင်ပြင်လက္ခဏာ (2019) - Your Brain On Porn On
neuroscience Biobehav ဗျာ 2019 ဇွန် 24 ။ pii: S0149-7634 (19) 30370-7 ။ Doi: 10.1016 / j.neubiorev.2019.06.032 ။
ကုန်အမှတ်တံဆိပ် M က1, Wegmann E ကို2, Stark R ကို3, Muller တစ်ဦးက4, K သည်Wölfling5, Robbins TW6, Potenza MN7.
စွဲလမ်းစေအပြုအမူတွေ cue-reactivity ကိုနှင့်တဏှာနှင့်ဆက်စပ်နေပါသည်
စွဲလမ်းစေအပြုအမူတွေကိုလျော့နည်းသွား inhibitory ထိန်းချုပ်မှုနှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည်
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤကဲ့သို့သောလောင်းကစား, ဂိမ်း,-စျေးဝယ်ဝယ်ယူနှင့်အတင်းအကျပ်ပြုတတ်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအဖြစ်စွဲလမ်းအပြုအမူတွေအများအပြားအမျိုးအစားများများအတွက်တရားဝင်ဖြစ်ဖို့ငြင်းခုန်ရသောပုဂ္ဂိုလ်-အပေါ်ဘယ်လိုသက်ရောက်မှု-သိမှတ်ခံစားမှု-Executive (I-PACE) မော်ဒယ်၏ Interaction ၏ updated version ကိုအဆိုပြု ပုံမမှန်။ မကြာသေးမီပင်ကိုယ်မူလတွေ့ရှိချက်များနှင့်သီအိုရီထည့်သွင်းစဉ်းစားပေါ်အခြေခံပြီးကျနော်တို့စွဲလမ်းအပြုအမူတွေထိုကဲ့သို့သော inhibitory ထိန်းချုပ်မှုနှင့်ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ခြင်းအဖြစ် predisposing variable တွေကို, တိကျတဲ့လှုံ့ဆော်မှုမှထိခိုက်စေခြင်းနှင့်သိမြင်မှုတုံ့ပြန်မှုများနှင့်အလုပ်အမှုဆောင် functions များ, အကြားအပြန်အလှန်၏အကျိုးဆက်အဖြစ်ဖွံ့ဖြိုးကြောင်းငြင်းခုန်။ စွဲလမ်းစေအပြုအမူတွေ၏လုပ်ငန်းစဉ်များတွင် cue-reactivity ကို / တဏှာနှင့်လျော့နည်းသွား inhibitory ထိန်းချုပ်မှုများအကြားအသင်းအဖွဲ့များလေ့အပြုအမူတွေ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုအထောက်အကူပြု။ အထူးသဖြင့် ventral striatum, amygdala နှင့် dorsolateral prefrontal ဒေသများအကြားနံရံပစ်ကစားနည်း-striatal ဆားကစ်၏အဆောက်အဦများ, အကြားတစ်ဦးမညီမမျှအစောပိုင်းအဆင့်များနှင့်စွဲလမ်းဖြစ်စဉ်များ၏နောက်ပိုင်းတွင်အဆင့်ဖို့ dorsal striatum မှအထူးသဖြင့်သက်ဆိုင်ရာဖြစ်နိုင်သည်။ အဆိုပါငါ-PACE မော်ဒယ်စွဲလမ်းအပြုအမူတွေနဲ့လက်တွေ့အလေ့အကျင့်အပေါ်အနာဂတ်လေ့လာမှုများများအတွက်သီအိုရီအခြေခံအုတ်မြစ်သည်ဖြစ်နိုင်သည်။ အနာဂတ်လေ့လာမှုများဘုံနှင့်ထူးခြားသောစွဲလမ်း, obsessive-compulsive-related, ချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့-ထိန်းချုပ်မှုပါဝင်ပတ်သက်ယန္တရားများနှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာ-အသုံးပြုမှုမမှန်စုံစမ်းစစ်ဆေးရန်သငျ့သညျ။
KEYWORDS: အမူအကျင့်စှဲ; ဝယ်-စျေးဝယ်ရောဂါ; cue-reactivity ကို; လောင်းကစားဝိုင်းရောဂါ; ဂိမ်းကစားခြင်းရောဂါ; inhibitory ထိန်းချုပ်မှု; ပြဿနာညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှု
ပုဂ္ဂိုလ်-အပေါ်ဘယ်လိုသက်ရောက်မှု-သိမှတ်ခံစားမှု-Executive (I-PACE) ၏ Interaction တိကျတဲ့အင်တာနက်အသုံးပြုမှုကိုမမှန်များ၏မော်ဒယ် (နှစ်ယောက်ထက်ပိုလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းထုတ်ဝေခဲ့သည်ကုန်အမှတ်တံဆိပ် et al ။ , 2016b) ။ တစ်ခုမှာရည်ရွယ်ချက်ညစ်ညမ်း, ဝယ်-စျေးဝယ်များနှင့်လူမှုရေး-ကွန်ရက်ကြည့်ရှု, ထိုကဲ့သို့သောအခါ, ကစား, လောင်းကစားရာတွင်အသုံးပြုသောသူတို့သည်အဖြစ်သတ်သတ်မှတ်မှတ် Internet application များ, တစ်ခုစွဲလမ်းအသုံးပြုမှုများ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအခြေခံစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် neurobiological ဖြစ်စဉ်များကိုဖော်ပြရန်ဖို့ဖြစ်တယ်။ ယင်း I-PACE မော်ဒယ်များ၏ထုတ်ဝေကတည်းကကြောင့်ဂိမ်းကစားရောဂါ (ဥပမာအဘို့အတကမ္ဘာလုံးမသာသုတေသီများအားဖြင့်အတော်လေးမကြာခဏကိုးကားထားသည် Deleuze et al ။ , 2017; Dieter et al ။ , 2017; dong et al ။ , 2019; Kaess et al ။ , 2017; Lee က et al ။ , 2018a; Lee က et al ။ , 2018b; လီ et al ။ , 2018; Paulus et al ။ , 2018; Sariyska et al ။ , 2017), ဒါပေမယ့်လည်းရောဂါ (ဥပမာလောင်းကစားအဘို့, Ioannidis et al ။ , 2019b; Starcke et al ။ , 2018ပြဿနာညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုအပါအဝင်), compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူရောဂါ (ဥပမာ, Carnes & ချစ်ခြင်းမေတ္တာ, 2017; Strahler et al ။ , 2018; Wéry et al ။ , 2018), ဝယ်-စျေးဝယ်ရောဂါ (ဥပမာ, Lam & Lam, 2017; Vogel et al ။ , 2018), ဆက်သွယ်ရေး applications များ (ဥပမာအလွန်အကျွံသုံးစွဲခြင်း, ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဒမ်စီ et al ။ , 2019; Elhai et al ။ , 2018; Kircaburun & Griffiths က, 2018; Montage et al ။ , 2018; Rothen et al ။ , 2018), မသတ်မှတ်ထားသောအင်တာနက်အသုံးပြုမှုကိုရောဂါ (ဥပမာ, Carbonell et al ။ , 2018; Emelin et al ။ , 2017; Ioannidis et al ။ , 2019a; Lachmann et al ။ , 2018; Vargas et al ။ , 2019; zhou et al ။ , 2018b), နှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာ-အသုံးပြုမှုမမှန်အပါအဝင်အခြားစွဲလမ်းအပြုအမူတွေများအတွက် (zhou et al ။ , 2018a) ။ မကြာသေးမီကဖြန့်ချိလျက်ရှိအဖြစ်ရောဂါများ၏နိုင်ငံတကာခွဲခြားရေး (ICD-11) ၏ဒသမထုတ်ဝေ, (ကမ္ဘာ့ဖလား-ကျန်းမာရေး-အဖွဲ့, 2019), (အစား Diagnostic ၏ပဉ္စမ edition အတွက်အင်တာနက်ဂိမ်းကစားရောဂါဥပမာကစားရောဂါနှင့်စာရင်းအင်းလက်စွဲ (DSM-5) အတွက်, အဆိုပါရောဂါ၏အလယ်အလတ်ရည်ညွှန်းခြင်းမရှိဘဲရောဂါသူ့ဟာသူ (ဥပမာလောင်းကစားရောဂါ) အပေါ်အာရုံစိုက်ယား, 2013) ။ အဆိုပါ ICD-11 ခုနှစ်, အပြုအမူများ၏ပတ်ဝန်းကျင်နောက်ပိုင်းတွင်အများစုအော့ဖ်လိုင်းသို့မဟုတ်လောင်းကစားခြင်းနှင့်ဂိမ်းကစားခြင်းမမှန်များအတွက်အများစုအွန်လိုင်းအဖြစ်သတ်မှတ်ထားသောနိုင်ပါသည်။ အကျိုးဆက်ကတော့ပြဿနာအပြုအမူ၏အခြေခံလုပ်ငန်းစဉ်ကိုရှင်းပြနေတဲ့မော်ဒယ်အဖြစ်ကောင်းစွာနှစ်ဦးစလုံးအွန်လိုင်းနှင့်အော့ဖ်လိုင်းပတ်ဝန်းကျင်နှင့်အော့ဖ်လိုင်းနှင့်အွန်လိုင်းအပြုအမူတွေကိုပေါင်းစပ်များအတွက်တရားဝင်ဖြစ်သင့်သည်။ (ကျနော်တို့အပြုအမူသူ့ဟာသူစဉ်းစားရန်အဓိကဒြပ်စင်ကြောင်းအဆိုပြုဆက် (အွန်လိုင်းအော့ဖ်လိုင်းသာရှိပြီးပြည်ပမှ) ကပတ်ဝန်းကျင်ကိုပုံမှန်အားဖြင့်အလယ်တန်းဖြစ်နိုင်သည်ပေမယ့်ဒီအပြုအမူတွေကိုဖြတ်ပြီးသီးခြားစွဲလမ်းအပြုအမူတွေ၏စကားရပ်နှင့်ဘုံကှဲလှဲဖို့အရေးကြီးအထောက်အကူပြုစေခြင်းငှါBaggio et al ။ , 2018) ။ ကျနော်တို့သီးခြားအင်တာနက်အသုံးပြုမှုကိုမမှန်အဘို့, ဒါပေမယ့်လည်းစွဲလမ်းအပြုအမူတွေ၏အခြားအမျိုးအစားများဘို့မဟုတ်သာတရားဝင်ဖွစျလိမျ့မညျ hypothesize သောငါ-PACE မော်ဒယ်တစ်ဦး updated version ကိုအကြံပြုအပ်ပါသည်။ ဤသည် updated ငါ-PACE မော်ဒယ်စွဲလမ်းအပြုအမူတွေ၏တစ်ဦးချင်းစီစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် neurobiological ယန္တရားများအပေါ် concentrates ။ မီဒီယာ-တိကျတဲ့ရှုထောင့်နှင့်ဖြစ်နိုင်ဖွယ်တစ်ခုစွဲလမ်းအပြုအမူ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုအရှိန်မြှင့်သို့မဟုတ်လျှော့သောအပြုအမူနှင့်ဆက်စပ်သောအခြားပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးအချက်များထို့နောက်မော်ဒယ်၏တိကျသောဗားရှင်းများအတွက်သတ်မှတ်ထားသောနှင့်ဖော်ပြထားနိုငျသညျ။ သဖန်းသီး။ 1 သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် / အလတ်စားရှုထောင့်, တစ်ဦးချင်းစီ '' တုံ့ပြန်မှုများနှင့်စွဲလမ်းအပြုအမူတွေအတွက်ပါဝင်ပတ်သက်မူအကျင့်များနှင့် neurobiological အချက်များအကြားအဆိုပြုထားကွဲပြားခြားနားမှုအကျဉ်းချုပ်။
High-res ပုံရိပ် (276KB) Download
သဖန်းသီး။ 1။ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ရှုထောင့်, လူတစ်ဦး၏တစ်ဦးချင်းစီတုံ့ပြန်မှုများနှင့်အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှထပ်ခါတလဲလဲသတ်သတ်မှတ်မှတ်အပြုအမူ၏အကျိုးဆက်များကိုကွာခြား။ အဆိုပါပြန်လည်ပြင်ဆင်ငါ-PACE မော်ဒယ်စွဲလမ်းအပြုအမူတွေကိုဖွံ့ဖြိုးဆဲတွင်ပါဝင်ပတ်သက်သည့်လူတစ်ဦး၏တုံ့ပြန်မှုများနှင့်အကျိုးဆက်များအပေါ် concentrates ။
ထို့အပြင်ကျနော်တို့နှစ်ဦးကိုခွဲမော်ဒယ်များအစောပိုင်းအဆင့်တွင်ပါဝင်ပတ်သက်သည့်ယန္တယားတစ်ခုနှင့်စွဲလုပ်ငန်းစဉ်၏နောက်ပိုင်းတွင်အဆင့်ဆင့်တွင်ပါဝင်ပတ်သက်သည့်ယန္တယားတစ်ခုကွာခြားခြင်းဖြင့်ပိုပြီးရှင်းရှင်းလင်းလင်းပုံစံများ၏ဖြစ်စဉ်ကိုဇာတ်ကောင်သတ်မှတ်ခြင်းမှာရည်ရွယ်ပါသည်။ ကျနော်တို့ငါ-PACE မော်ဒယ်တွင်ထည့်သွင်းအပေါငျးတို့သအစိတ်အပိုင်းများကို၏အသေးစိတျဆှေးနှေးမှု ( cf. ပြန်လုပ်ကြဘူး ကုန်အမှတ်တံဆိပ် et al ။ , 2016b) ။ အဲဒီအစားကျနော်တို့အဓိကအားဖြင့်အထူးသဖြင့် Meta-ဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းနှင့်ငါ-PACE update ကိုမှုတ်သွင်းကြောင်းစနစ်တကျပြန်လည်သုံးသပ်ချက်ထဲမှာလတ်တလောဆောင်းပါးများအပေါ်အာရုံစူးစိုက်။
2 ။ စွဲလမ်းစေအပြုအမူတွေ၏ updated ငါ-PACE မော်ဒယ်
ယင်း I-PACE မော်ဒယ်၏တည်းဖြတ်မူသုံးခုအဓိကခြေလှမ်းတို့ပါဝင်သည်။ ပထမဦးစွာကျွန်တော်စွဲလမ်းအပြုအမူတွေ (လောင်းကစားဝိုင်းမမှန်, ဂိမ်းရောဂါနှင့်အခြား) ၏ကွဲပြားခြားနားသောအမျိုးအစားများတွင်ပါဝင်ပတ်သက်နှင့်ပိုပြီးအပြုအမူ-တိကျတဲ့ predisposing variable တွေကိုမှသူတို့ကိုခွဲခြားခံနေရအဖြစ်ထည့်သွင်းစဉ်းစားခဲ့ကြရသော predisposing variable တွေကိုအပေါ်အာရုံစူးစိုက်။ ဒုတိယအနေကျနော်တို့ကိုပိုပြီးတိကျစွာမကြာသေးမီတွေ့ရှိချက်မှလေးစားမှုနှင့်အတူငါ-PACE မော်ဒယ်အတွက်စွဲလမ်းလုပ်ငန်းစဉ်၏အတွင်းစိတ်စက်ဝိုင်းသတ်မှတ်။ တတိယကျနော်တို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းစွဲ၏စင်မြင့်ပေါ်မှာမူတည်ပြီး variable တွေကိုစိစစ်ခြင်းနှင့်ဖြန်ဖြေအလားအလာကွဲပြားခြားနားသောအခန်းကဏ္ဍသရုပျဖျောနိုင်ရန်အတွက်အစောပိုင်းနှင့်လုပ်ငန်းစဉ်၏နောက်ပိုင်းတွင်အဆင့်ဆင့်အကြားခွဲခြား။ စွဲလမ်းစေအပြုအမူတွေ၏ပြန်လည်ပြင်ဆင်ထားသောငါ-PACE မော်ဒယ်မှာပြသ သဖန်းသီး။ 2. သဖန်းသီး။ 2တစ်ဦးကစွဲလမ်းအပြုအမူတွေ၏အစောပိုင်းအဆင့်ဆင့်အထူးအရေးကြီးသောထည့်သွင်းစဉ်းစားသည်ဟု variable တွေကိုအကြားအပြန်အလှန်ပြသထားတယ်။ သဖန်းသီး။ 2B ကိုစွဲလမ်းဖြစ်စဉ်များ၏နောက်ပိုင်းတွင်အဆင့် variable တွေကိုများ၏ interaction ကဖော်ပြသည်။
High-res ပုံရိပ် (787KB) Download
သဖန်းသီး။ 2။ စွဲလမ်းစေအပြုအမူတွေများအတွက်ပြန်လည်ပြင်ဆင်ထားသောငါ-PACE မော်ဒယ်။ ပုံတစ်ဦးကစွဲလမ်းအပြုအမူတွေ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏အစောပိုင်းအဆင့်ဆင့်ပြသထားတယ်။ ပုံခနောက်ပိုင်းတွင်လုပ်ငန်းစဉ်၏အဆင့်ဆင့်နှင့်စွဲလမ်းအပြုအမူတွေများ၏ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုမှပံ့ပိုးအချက်များဖော်ပြထားသည်။ ပိုပြီးခက်ခဲတဲ့မြှားအားကောင်းဆက်သွယ်မှု / အရှိန်မြှယန္တရားများဖော်ပြသည်။
2.1 ။ ယင်း I-PACE မော်ဒယ်၏ P-အစိတ်အပိုင်း
P-အစိတ်အပိုင်း (အတွင်းဆွေးနွေးမှုကိုမြင်ရဖွယ်ရှိ variable တွေကို predisposing အဖြစ်စွဲလမ်းမှုလုပ်ငန်းစဉ်များတွင်ပါဝင်ပတ်သက်သူတစ်ဦးရဲ့ core ဝိသေသလက္ခဏာများကိုကိုယ်စားပြုတယ် ကုန်အမှတ်တံဆိပ် et al ။ , 2016b) ။ အထွေထွေ predisposing variable တွေကိုပါ (မော်ဒယ်များ၏အထက် box ထဲမှာလက်ဝဲဘက်) အားလုံးစွဲလမ်းအပြုအမူတွေအမျိုးအစားများ (ဥပမာ, လောင်းကစားရောဂါ, ဂိမ်းရောဂါ, ရောဂါ-စျေးဝယ်ဝယ်ယူ, ညစ်ညမ်း-ကြည့်ရှုရောဂါ / hypersexual အပြုအမူ) မှအရေးကြီးအထောက်အကူပြုပေမည်။ ဤအအလားအလာ predisposing variable တွေကိုစာရင်းအပြည့်အစုံမဟုတ်ပါ။ ကိုယ်ကသာအထောက်အထားစွဲလမ်းအပြုအမူတွေ၏ကွဲပြားခြားနားသောအမျိုးအစားများဘို့ခွန်အား၌ကွဲပြားစေခြင်းငှါသော်လည်း, Meta-ဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းကနေအပါအဝင်အတော်လေးကျယ်ပြန့်သက်သေအထောက်အထားတည်ရှိရသောအဘို့အ variable တွေကို, အကျဉ်းချုပ်။ ဒေတာများ (လောင်းကစားဝိုင်းရောဂါမှသိသိသာသာမျိုးရိုးဗီဇအလှူငွေအကြံပြုLobo, 2016; Potenza, 2017, 2018; Xuan et al ။ , 2017) နှင့်သတ်မှတ်အင်တာနက်အသုံးပြုမှုကိုရောဂါ (Hahn et al ။ , 2017) ။ ထို့အပွငျအနုတ်လက္ခဏာအစောပိုင်းကလေးဘဝအတွေ့အကြုံများ (လောင်းကစားဝိုင်းရောဂါအတှကျအအားနည်းချက်အချက်များအဖြစ်အစီရင်ခံခဲ့ကြရောဘတ် et al ။ , 2017) နှင့်ဂိမ်းကစားခြင်းရောဂါ (Schneider et al ။ , 2017), စွဲလမ်းအပြုအမူတွေအတွက်ပူးတွဲမှု၏အခန်းကဏ္ဍကို၏မကြာသေးမီသီအိုရီထည့်သွင်းစဉ်းစားနှင့်ကိုက်ညီတွေ့ရှိချက် (Alvarez-Monjaras et al ။ , 2018) ။ Psychopathological ဆက်စပ်မှု, အထူးသဖြင့်စိတ်ကျရောဂါနှင့်လူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်မှုရှိလောင်းကစားဝိုင်းအဘို့အကြိမ်ကြိမ်အစီရင်ခံခဲ့ကြ (Dowling et al ။ , 2017), ဂိမ်းကစားခြင်း (Männikkö et al ။ , 2017), မသတ်မှတ်ထားသောအင်တာနက်အသုံးပြုမှုကို (ဟို et al ။ , 2014), နှင့်ဝယ်-စျေးဝယ် (Muller et al ။ , 2019) မမှန်နှင့်အခြားအမူအကျင့်စွဲလမ်း (Starcevic & Khazaal, 2017) ။ ထိုကဲ့သို့သောမြင့်မားတဲ့ Impulse အဖြစ်ကဒေါသ features တွေ, အစ (လောင်းကစားဝိုင်းတွေနဲ့ဆက်နွယ်ပြီDowling et al ။ , 2017), ဂိမ်းကစားခြင်း (Gervasi et al ။ , 2017; Kuss et al ။ , 2018; Ryu et al ။ , 2018) နှင့်သတ်မှတ်အင်တာနက်အသုံးပြုမှုကို (Kayiş et al ။ , 2016) မမှန်, ဂိမ်းရောဂါနှင့်အတူအလုပ်မဖြစ်ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းစတိုင်များရှိပါတယ်အဖြစ် (Schneider et al ။ , 2018) ။ ယင်း I-PACE မော်ဒယ်တှငျကြှနျုပျတို့တိကျတဲ့စွဲလမ်းအပြုအမူတွေကိုရိုသေလေးစားမှုနှင့်အတူနောက်ထပ်သတ်မှတ်ထားသောစေခြင်းငှါယေဘုယျစည်းကမ်းချက်များကို (ဥပမာ, Impulse အပါအဝင်ဥပမာ psychopathology, ဒေါသ features တွေ) ကိုအသုံးပြုပါ။ အဆိုပါအပြုအမူ-တိကျတဲ့ predisposing variable တွေကိုပါ (မော်ဒယ်အတွက်အထက် box ရဲ့ညာဘက်ခြမ်း, သဖန်းသီး။ 2A နှင့် B) သည်ကွဲပြားခြားနားသောတိကျသောစွဲလမ်းအပြုအမူတွေများအတွက်ဝိသေသစဉ်းစားနေကြသည်။ ဥပမာအားဖြင့်, မြင့်မားသောအသစ်အဆန်း-ရှာနှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီ (လောင်းကစားဝိုင်းရောဂါဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ပိုပြီးဖြစ်နိုင်သည်del Pino-Gutierrez et al ။ , 2017) ။ ပိုမိုမြင့်မားသောကျူးကျော်ခြင်းနှင့် narcissistic ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးစရိုက်များနှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီ (ဂိမ်းရောဂါဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ပိုပြီးကျရောက်နေတဲ့ဖြစ်နိုင်သည်Gervasi et al ။ , 2017) ။ မြင့်မားတဲ့ရိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုနှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီ (hypersexual အပြုအမူသို့မဟုတ်ညစ်ညမ်း-အသုံးပြုမှုရောဂါဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ပိုပြီးဖြစ်နိုင်သည်Stark et al ။ , 2017), နှင့်မြင့်မားသောရုပ်ဝါဒတန်ဖိုးများနှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီဝယ်-စျေးဝယ်ရောဂါဖွံ့ဖြိုးဆဲဖို့အထူးသဖြင့်ကျရောက်နေတဲ့ဖြစ်နိုင်ပါသည် (Claes et al ။ , 2016; Muller et al ။ , 2014).
2.2 ။ အတွင်းစက်ဝိုင်း: အဆိုပါအကျိုးသက်ရောက်စေ (A-), သိမှတ်ခံစားမှု (C-), နှင့်ကိုယ့်-PACE မော်ဒယ်၏သေဒဏ်စီရင် (e-) အစိတ်အပိုင်းများ
ယင်း I-PACE မော်ဒယ်များ၏အတွင်းစိတ်စက်ဝိုင်းတစ်ခုမှာအဓိကစိတ်ကူးတစ်ဦးပြဿနာနှင့်စွဲလမ်းအပြုအမူ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုတိကျတဲ့အခြေအနေများကယ်နှုတ်တော်မူကြောင်းများကိုသာတစ်ဦးချင်းစီ '' predisposing variable တွေကိုနှင့်အချို့သောကဏ္ဍများအကြားအပြန်အလှန်ထဲတွင်ဖြစ်ပေါ်သောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ အဆိုပါ interaction ကတိကျသောအပြုအမူနှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသောဆန္ဒပြည့်နှင့်လျော်ကြေးငွေ၏အတွေ့အကြုံများကိုမှု။ အစောပိုင်းအဆင့် (ခုနှစ်တွင်သဖန်းသီး။ 2တိကျသောအခြေအနေများတွင်တစ်ဦး), တစ်ဦးချင်းစီအပြုအမူ-related လှုံ့ဆော်မှုနှင့်အတူပြင်ပ (ဥပမာထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်မှု) ရိပ်မိစေခြင်းငှါသို့မဟုတ်ပြည်တွင်းရေးအစပျိုးခြင်း (ဥပမာ, အနုတ်လက္ခဏာသို့မဟုတ်အလွန်အပြုသဘောဆောင်သည့်စိတ်ခံစားမှု) ။ အဆိုပါသဘောထားအမြင်ထိုကဲ့သို့သောသည်ဤလှုံ့ဆော်မှုမှတိုးမြှင့်အာရုံစိုက်မှုအဖြစ်ကိုထိခိုက်ခြင်းနှင့်သိမြင်မှုတုံ့ပြန်မှုအတွက်ရလဒ်နှင့်တိကျသောနည်းလမ်းပြုမူဖို့တိုကျတှနျးထားမည် ဥပမာ (အွန်လိုင်းဂိမ်းသို့မဟုတ်အမြင်ညစ်ညမ်းကစားရန်တိုကျတှနျးထားStarcke et al ။ , 2018).
ဘေးဒဏ်သင့်ခြင်းနှင့်သိမြင်မှုတုံ့ပြန်မှုတိကျတဲ့နည်းလမ်းပြုမူရန်ဆုံးဖြတ်ချက်များဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြ။ တိကျတဲ့အပြုအမူအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်နှစ်ခုအပြန်အလှန်စနစ်များအားဖြင့်ပဲ့ထိန်းစေခြင်းငှါ: အဓိကအားဝန်ထမ်းတွေရဲ့သင်ယူမှု (ဂန္နှင့်အော်ပရေတာအေးစက်) အပေါ်အခြေခံပြီးသောကာထကြွလွယ်သော / reactive စနစ်, နှင့်အဓိကအားဖြင့်ဆင်ခြင်ခြင်းနှင့်ဆက်စပ်သောရောင်ပြန် / deliberative စနစ်, နှင့် အလုပ်အမှုဆောင်လုပ်ဆောင်ချက်များကို (Kahneman, 2003; Schiebener & အမှတ်တံဆိပ်, 2015; Strack & Deutsch, 2004) ။ စှဲနှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီအတွက်, အပြုအမူ limbic အဆောက်အဦများအပါအဝင်ထကြွလွယ်သော / reactive အာရုံကြောစနစ်များ, (အပေါ် ပို. ပို. မှီခိုဖို့စဉ်းစားသည်နို et al ။ , 2006) ။ ရမ္မက်နှင့်အလိုဆန္ဒများကိုကျော် Prefrontal-Cortex-related inhibitory ထိန်းချုပ်မှု (အစွဲလုပ်ငန်းစဉ်အတွင်းလျော့စေခြင်းငှါBechara, 2005; Volkow & Morales, 2015) ။ ဤအသီအိုရီအမြင်များကိုပေါင်းစပ်ပြီးကျနော်တို့ပြင်ပသို့မဟုတ်ပြည်တွင်းရေးအစပျိုးခြင်းနှင့်ဆုံးဖြတ်ချက်များမှထိခိုက်စေခြင်းနှင့်သိမြင်မှုတုံ့ပြန်မှုအကြားဆက်ဆံရေးကိုတိကျတဲ့အပြုအမူတွေအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့အဆိုပြု (စိတ်ဓါတ်များ-တိကျတဲ့သို့မဟုတ်လှုံ့ဆော်မှု-တိကျတဲ့ inhibitory ထိန်းချုပ်မှုမတူဘဲအတွက်) ယေဘုယျ inhibitory ထိန်းချုပ်မှုအဆင့်များကတည်းဖြတ်ထားပါသည်နှင့် Self-စည်းမျဉ်း / Self-ညွှန်ကြား (Hahn et al ။ , 2017), အနည်းဆုံးအားစွဲလမ်းစေအပြုအမူတွေ၏အစောပိုင်းအဆင့်၌တည်၏။ Meng, Deng, ဝမ်, Guo နှင့်လီ (2015) ကအဆိုပါ Meta-analysis သည် prefrontal အလုပ်မဖြစ်ဆန္ဒပြည့်၏နှောင့်နှေးတွင်ပါဝင်ပတ်သက်ပဋိပက္ခများကိုအပါအဝင်ဆုလာဘ်-မျှော်လင့်ခြင်းနှင့် Self-စည်းမျဉ်းစနစ်များအကြားအလားအလာပဋိပက္ခညွှန်း, ဂိမ်းရောဂါနှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသောသရုပ်ဖော် (Volkow & Baler, 2015) ။ အထွေထွေ inhibitory ထိန်းချုပ်မှုနှင့် ပတ်သက်. Yao အဘိဓါန် et al ။ (2017) အလုပ်အမှုဆောင်လုပ်ငန်းဆောင်တာများတွင်လျှော့ချဆက်စပ်လျက်ရှိသောဂိမ်းရောဂါအတွက်အလုပ်လုပ်တဲ့နှင့်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာဦးနှောက်ကိုပြောင်းလဲသတင်းပို့ပါ။ တိကျသောအပြုအမူ (ဥပမာ, တစ်ဦးလောင်းကစားရုံအတွက်လောင်းကစားဝိုင်းအွန်လိုင်းမှဂိမ်းကစားပစ္စည်းများဝယ်ယူ) (အနုတ်လက္ခဏာစိတ်ခံစားမှုကနေဆန္ဒပြည့်သို့မဟုတ်သက်သာ၏ခံစားချက်များကိုဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြစေခြင်းငှါLaier & အမှတ်တံဆိပ်, 2017) ။ ဤရွေ့ကားအတွေ့အကြုံများနောက်ပိုင်းတွင်တိကျသောအပြုအမူနှင့်ဆက်စပ်သောပုဂ္ဂလဒိဋ္ဆုလာဘ်ကိုမျှော်လင့်ပြောင်းပေးပါ။ သူတို့ကလည်းတစ်ဦးချင်းဖြေရှင်းစတိုင်ပြုပြင်မွမ်းမံလိမ့်မည်။ တစ်ဦးချင်းစီအွန်လိုင်းဂိမ်းကစားကောင်းသောခံစားချက်တွေကိုထုတ်လုပ်သို့မဟုတ်အနုတ်လက္ခဏာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြည်နယ်များရှောင်ရှားအတွက်ထိရောက်သောကြောင်းလေ့လာသင်ယူမယ်ဆိုရင်ဥပမာ, သူတို့ (အွန်လိုင်းဂိမ်းကစားခြင်းနေ့စဉ်အသက်တာ၌စိတ်ခံစားမှုနှင့်အတူကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းဘို့အထောကျအကူပွုသောမျှော်မှန်းယေဘုယျစေခြင်းငှါKuss et al ။ , 2018; Laier et al ။ , 2018) ။ မျှော်လင့်ချက်များနှင့်အကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းစတိုင်များ၏အပြောင်းအလဲများကိုတတ်ပြီးခံစားချက်တွေကိုသို့မဟုတ်ပြင်ပသို့မဟုတ်ပြည်တွင်းရေးအစပျိုးခြင်းနှင့်အတူရင်ဆိုင်ခံရသည့်အခါနောက်ဆက်တွဲအခြေအနေများတွင်အလိုဆန္ဒ၏ခံစားချက်များကိုနှင့်အတူတုံ့ပြန်များ၏ဖြစ်နိုင်ခြေကိုတိုးမြှင့်စေနိုင်သည်။ တဏှာအတွေ့အကြုံများနှင့်မျှော်လင့်ထား၏ဤအပြန်အလှန်အင်တာနက်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ဆောင်မှုများကို (တစ်ဦးစွဲလမ်းအသုံးပြုမှုပိုမိုမြင့်မားလက္ခဏာပြင်းထန်မှုနှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီအားဖြင့်သရုပ်ပြခဲ့ပြီးWegmann et al ။ , 2018b) ။ အချိန်ကျော်, ကိုထိခိုက်ခြင်းနှင့်သိမြင်မှုတုံ့ပြန်မှုအကြားကဤအသင်းအဖွဲ့များ, တိကျသောနည်းလမ်းများ, ဆန္ဒပြည့်နှင့်လျော်ကြေးငွေ၏အတွေ့အကြုံများနှင့်အပြုအမူ-တိကျတဲ့မျှော်လင့်ထားပြုမူဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေပိုမိုအားကောင်းဖြစ်လာပေမည်။ အကျိုးဆက်ယေဘုယျ inhibitory ယန္တရားများအားဖြင့်အပြုအမူတွေကိုထိန်းချုပ်ကပိုခက်ခဲဖြစ်လာစေခြင်းငှါ, တိကျသောနည်းလမ်းပြုမူရန်ဆုံးဖြတ်ချက်များအစပျိုးခြင်းမှထကြွလွယ်သော / reactive တုံ့ပြန်မှုများကပိုပြီးနေကြသည်ပဲ့ထိန်းနိုင်ပါသည်။ စွဲလမ်းစေအပြုအမူတွေ၏နောက်ပိုင်းတွင်အဆင့်ဆင့်တွင်ပါဝင်ပတ်သက်ခံရဖို့အဆိုပြုထား mechanisms အတွက်အကျဉ်းချုံးထားပါသည် သဖန်းသီး။ 2B.
အဆိုပါစွဲလုပ်ငန်းစဉ်၏နောက်ပိုင်းတွင်အဆင့်ဆင့်မှာပြောင်းကုန်ပြီတဖြည်းဖြည်းဖြစ်နိုင်သည်သော်လည်း, ထိုဖျောပွအသင်းအဖွဲ့များအချို့သောအခြေအနေများတွင်အလိုအလျှောက်ခံစားမိစေခြင်းငှါလေ့အပြုအမူတွေအတွက်ရရှိလာတဲ့, ပို. ပို. ခိုင်ခံ့ဖြစ်လာပေမည်။ Cue-reactivity ကိုနှင့်တဏှာ (အေးစက်လုပ်ငန်းစဉ်များ၏အကျိုးဆက်အဖြစ်အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှထိခိုက်စေခြင်းနှင့်သိမြင်မှုတုံ့ပြန်မှုကနေတဖြည်းဖြည်းတိုးတက်ပြောင်းလဲစေခြင်းငှါStarcke et al ။ , 2018) ။ ယခင်သုတေသန (စွဲလမ်းအပြုအမူတွေအတွက် ventral နှင့် dorsal striatum နှငျ့ပတျသကျသောအာရုံကြောဆုလာဘ်စနစ်များနှင့်အခြား limbic အဆောက်အဦထဲမှာစွဲ-related လှုံ့ဆော်မှုနှင့်လှုပ်ရှားမှုများဆီသို့ဦးတည်အကဲဆတ်ခြင်းအရေးကြီးသောအခန်းကဏ္ဍကိုမီးမောင်းထိုးပြFauth-Bühler & မန်း, 2017; Fauth-Bühler et al ။ , 2017; Luijten et al ။ , 2017; ပလောင်း et al ။ , 2017) ။ ပုဂ္ဂလဒိဋ္မျှော်လင့်ထား (သက်ဆိုင်ရာအပြုအမူ-related လှုံ့ဆော်မှုများနှင့်အစပျိုးခြင်းမှတဖက်သတ်သို့မဟုတ်ထင်ရသောအလိုအလျှောက်အာရုံကိုပါဝင်နိုင်ပါသည်သောအကျိုးသက်ရောက်စေခြင်းနှင့်သိမြင်မှုဘက်လိုက်မှုသို့တဖြည်းဖြည်းတိုးတက်ပြောင်းလဲစေခြင်းငှါJeromin et al ။ , 2016) ။ ကျနော်တို့အစားထိုးသက်ရောက်မှုများစွဲလမ်းမှုလုပ်ငန်းစဉ် ( cf. ၏နောက်ပိုင်းတွင်အဆင့်ဆင့်အတွက်ဝမ်းမြောက်စေပြီးအကျိုးသက်ရောက်မှုများကျော်ပိုမိုအားကောင်းဖြစ်လာကြောင်းအဆိုပြု ကုန်အမှတ်တံဆိပ် et al ။ , 2016b) ။ cue-reactivity ကို / တဏှာနှင့်လေ့အပြုအမူတွေအကြားဆက်ဆံရေးအပေါ်ယေဘုယျ inhibitory ထိန်းချုပ်မှုများကိုစိစစ်ဆိုးကျိုးများအပြင်, ကျနော်တို့ (လှုံ့ဆော်မှု-တိကျတဲ့ inhibitory ထိန်းချုပ်မှုစွဲလမ်းဖြစ်စဉ်များ၏နောက်ပိုင်းတွင်အဆင့်ဆင့်အတွက်အာမခံအဖြစ်ပြုမူစေခြင်းငှါအဆိုပြုEveritt & Robbins, 2016) ။ အတော်ကြာသုတေသီများ (လောင်းကစားဝိုင်းရောဂါအတွက် inhibitory ထိန်းချုပ်မှုများနှင့်အလုပ်အမှုဆောင်လုပ်ဆောင်ချက်များကိုအတွက်ချို့ယွင်းအလေးပေးပြောကြားခဲ့သည်ပါပြီIoannidis et al ။ , 2019b; ဗန် Timmeren et al ။ , 2018), ဂိမ်းရောဂါ (Argyriou et al ။ , 2017; Kuss et al ။ , 2018; Yao အဘိဓါန် et al ။ , 2017) နှင့်သတ်မှတ်အင်တာနက်အသုံးပြုမှုကိုမမှန် (Ioannidis et al ။ , 2019a) ။ ကျနော်တို့ယေဘုယျ inhibitory ထိန်းချုပ်မှုကိုလည်းစွဲလမ်းဖြစ်စဉ်များကာလအတွင်းလျော့ချနိုင်ပေမယ့်, လျော့နည်းသွားတိကျတဲ့လှုံ့ဆော်မှု-related inhibitory ထိန်းချုပ်မှု၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုစွဲလမ်းအပြုအမူတွေ၏နောက်ပိုင်းတွင်အဆင့်ဆင့်အတွက်လေ့အပြုအမူတွေအတွက်အရေးကြီးပါဝင်ပတ်သက်ကြောင်း, သို့သော်, တင်ပြသည်။ ကျနော်တို့လျှင် cue-reactivity ကိုနှင့်တဏှာပြင်ပသို့မဟုတ်ပြည်တွင်းရေးအစပျိုးခြင်းမှတုံ့ပြန်မှုအဖြစ်တီထွင်ခဲ့ကြကြောင်းအဆိုပြု, ဤ (ထို့နောက်လေ့ပြုမူများ၏ဖြစ်နိုင်ခြေကိုတိုးမြှင့်စေခြင်းငှါအရာ, စွဲလမ်းလှုံ့ဆော်မှုနှင့်အတူရင်ဆိုင်ခံရသည့်အခါအလိုဆန္ဒကိုထိန်းချုပ်ထားအတွက်လျှော့ချဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြစေခြင်းငှါPiazza & Deroche-Gamonet, 2013).
3 ။ Neurobiological ယန္တရားများ
3.1 ။ ယင်း I-PACE မော်ဒယ်များ၏အတွင်းစိတ်စက်ဝိုင်းထဲမှာပေါင်းစည်းစွဲ၏ Neuroscientific သီအိုရီ
စွဲလမ်းစေအပြုအမူတွေကိုရှင်းပြအများအပြား neuroscientific သီအိုရီနှင့်မော်ဒယ်များကတော့ငါ-PACE မော်ဒယ်များ၏အတွင်းစိတ်စက်ဝိုင်း (များ၏သီအိုရီမူဘောင်အတွင်းပေါင်းစည်းပြီကုန်အမှတ်တံဆိပ် et al ။ , 2016b) ။ တိုက်ရိုက် link တွေကိုမှမြင်နိုင်ပါသည် ချို့ယွင်းတုံ့ပြန်မှုတားစီးနှင့် Salience Attribution (ကျနော်-RISA) မော်ဒယ် (Goldstein & Volkow, 2011), မက်လုံးပေး-sensitive (ရော်ဘင်ဆင် & Berridge, 2008), Deficiency Syndrome ဆုချ (Blum et al ။ , 1996) မော်ဒယ်များနှင့်သီအိုရီများနှင့်စွဲလမ်း၏ Dual-ဖြစ်စဉ်ကိုချဉ်းကပ်ထဲမှာ (Bechara, 2005; Everitt & Robbins, 2005, 2016) နှင့်ရည်မှန်းချက်-ညွှန်ကြားအပြုအမူတွေနဲ့အလေ့အထအကြားအချိုးမညီမျှမှု၏အတွေးအခေါ်များ (Robbins et al ။ , 2019) ။ ကျနော်တို့လောင်းကစားဝိုင်းရောဂါ neuroscientific ထည့်သွင်းစဉ်းစားပေါင်းစပ်ပိုပြီးတိကျတဲ့သီအိုရီမော်ဒယ်များ (၏ရှုထောင့်ဖို့လည်းရည်ညွှန်းBlaszczynski & Nower, 2002; Goudriaan et al ။ , 2004) နှင့်ဂိမ်းကစားခြင်းရောဂါ (Dong & Potenza, 2014; ဝေ et al ။ , 2017) ။ ဤအသီအိုရီကိုပေါင်းစပ်ပြီးကျနော်တို့မက်လုံးပေး-oriented ရမ္မက်တိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်လိုတလက်ပေါ်နှင့်စွဲလမ်းအပြုအမူတွေ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုများအတွက်အဖြစ်အရေးကြီးသောအခြားတစ်ဖက်တွင်, ဤရမ္မက်နှင့်အလိုဆန္ဒများကိုကျော်အခွအေနေ-တိကျတဲ့ inhibitory ထိန်းချုပ်မှုလျော့ကျလာအကြားတစ်ဦးမညီမမျှ၏တိုးတက်မှုစဉ်းစားပါ။ အေးစက်ဖြစ်စဉ်များ၏ရလဒ်အဖြစ်တိုးမြှင့်မက်လုံးပေး sensitive က (Berridge et al ။ , 2009), စွဲဖြစ်စဉ်များ၏နောက်ပိုင်းတွင်အဆင့်အာရုံစိုက်မှုဘက်လိုက်မှုနှင့် cue-reactivity ကိုအတူပေါင်းသင်းစေနိုင်သည်။ ဆုလာဘ်ချို့တဲ့နှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီ (မက်လုံးပေးာင်းဖွံ့ဖြိုးဆဲဖို့အထူးသဖြင့်ကျရောက်နေတဲ့ဖြစ်နိုင်သည်Blum et al ။ , 2012) ။ မက်လုံးပေး salience စွဲလမ်းအပြုအမူတွေအတွက်ဆက်ဆံလိုအထောက်အကူပြုစေခြင်းငှါအရာ, cue-reactivity ကိုနှင့်တဏှာမြှင့်တင်ရန်နိုင်ပါတယ်။
အလုပ်အမှုဆောင်လုပ်ဆောင်ချက်များကိုအတွက်လျှော့ချ (ပစ္စည်းဥစ္စာ-အသုံးပြုမှုမမှန်အပါအဝင်အားနည်းချက်အချက်များနှင့်စွဲလမ်းအပြုအမူတွေ၏အကျိုးဆက်များအဖြစ်နှစ်ဦးစလုံးထည့်သွင်းစဉ်းစားကြVolkow et al ။ , 2012) ။ ထိုကဲ့သို့သောလောင်းကစားဝိုင်းနှင့်ဂိမ်းကစားခြင်းမမှန်အဖြစ်အမူအကျင့်စွဲလမ်းအတွက်, တဦးတည်းကြောင့်အလုပ်အမှုဆောင်လျှော့ချအားနည်းချက်အချက်များပါဝင်သည်နှင့်ဦးနှောက်မတိုက်ရိုက်ပစ္စည်းဥစ္စာ-related neurotoxic သက်ရောက်မှုပါဝင်ပတ်သက်နေကြသည်ကြောင့်, စွဲလမ်းအပြုအမူ၏အကျိုးဆက်အဖြစ်မဖွံ့ဖြိုးပါဘူးငြင်းခုန်လိမ့်မည်။ ဒီအယူအဆနှင့်ကိုက်ညီကျနော်တို့ယေဘုယျ inhibitory ထိန်းချုပ်မှုတစ်ခုလျော့နည်းသွားအဆင့်အတန်းကိုထိခိုက်အချို့ထွက်လာပါတယ်လှုံ့ဆော်မှုမှတုံ့ပြန်မှု (ဥပမာ, စိတ်ဖိစီးမှုသို့မဟုတ်အနုတ်လက္ခဏာစိတ်ခံစားမှု) နှင့်ဆုံးဖြတ်ချက်များမှအကြားဆက်ဆံရေးဟာကိုစိစစ် variable ကိုအဖြစ်စွဲလမ်းအပြုအမူများနှင့်အပြုအမူများအတွက်အားနည်းချက်အချက်ကြောင်းအဆိုပြု တိကျသောအပြုအမူအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံ (ကြည့်ရှု သဖန်းသီး။ 2တစ်ဦးက) ။ ထို့အပြင်သို့သော်ကျနော်တို့စှဲတဲ့အားနည်းချက်အချက်အဖြစ်အလုပ်အမှုဆောင်လုပ်ဆောင်ချက်များကို၏ဤစိစစ်အကျိုးသက်ရောက်မှုထက်ကျော်လွန်ကြောင်း, အခွအေနေ-တိကျတဲ့ inhibitory ထိန်းချုပ်မှုငြင်းခုန် (တဲ့အခါမှာစွဲ-related လှုံ့ဆော်မှုနှင့်အတူရင်ဆိုင်လျက်ရှိ) ပေမယ့်, စွဲလမ်းအပြုအမူတွေ၏အကျိုးဆက်အဖြစ်အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှလျော့ကျစေခြင်းငှါ - ပစ္စည်းဥစ္စာ-အသုံးပြုမှုမမှန်မှမတူဘဲ - ဦးနှောက်မတိုက်ရိုက် neurotoxic သက်ရောက်မှုအပြုအမူစှဲတွင်ပါဝင်ပတ်သက်နေကြသည်။ လှုံ့ဆော်မှု-တိကျတဲ့ inhibitory ထိန်းချုပ်လျှော့ချ (cue-reactivity ကိုနှင့်တဏှာအပေါ်အခြေခံသည့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနိုင်ပြီးစွဲ-related ဆားကစ်အတွက်အလုပ်လုပ်တဲ့ဦးနှောက်အပြောင်းအလဲများကအဖော်ပြုErsche et al ။ , 2012; Koob & Volkow, 2010; Volkow & Morales, 2015; Volkow et al ။ , 2012) ။ ထို့ကြောင့်စွဲလမ်းအပြုအမူတွေ၏နောက်ပိုင်းတွင်အဆင့် (သဖန်းသီး။ 2B က), လှုံ့ဆော်မှု-တိကျတဲ့ inhibitory ထိန်းချုပ်မှုဖြစ်စဉ်များ (ထို့နောက်တစ်ဦးချင်းအလိုအလျှောက်လေ့သို့မဟုတ်ထင်ရသောကငျြ့ပါမညျကြောင့်ပိုပြီးလုပ်တတ်မည်အကြောင်းအရာ, တဏှာကလွှမ်းမိုးစေခြင်းငှါနဲ့စွဲ-related လှုံ့ဆော်မှုရင်ဆိုင်ရန်နှင့်ဆက်စပ်သောတိုကျတှနျးထားEveritt & Robbins, 2005, 2013, 2016) ။
3.2 ။ ယင်း I-PACE မော်ဒယ်များ၏အတွင်းစိတ်စက်ဝိုင်းအတွင်းအဓိကလုပ်ငန်းစဉ်များ၏အာရုံကြောဆက်စပ်
အမူအကျင့်စွဲလမ်းအတွက် limbic / ဆုလာဘ်-oriented ဦးနှောက်ဆားကစ်နှင့် prefrontal ထိန်းချုပ်မှုတို့အကြားအဆိုပါဖျောပွအဆိုပြုထားသောမညီမမျှ (လောင်းကစားဝိုင်းရောဂါဘို့အတော်လေးကျယ်ကျယ်ပြန်လည်သုံးသပ်လျက်ရှိသည်Clark က et al ။ , 2013; Goudriaan et al ။ , 2014; Potenza, 2013; ဗန် Holst et al ။ , 2010) နှင့်ဂိမ်းကစားခြင်းရောဂါ (Kuss et al ။ , 2018; Weinstein, 2017; Weinstein et al ။ , 2017), Meta-ဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်း (ထဲမှာအပါအဝင်Meng et al ။ , 2015) ။ ဒီထက်ကျယ်ပြန့်မှာလည်းပြဿနာညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုအပါအဝင် compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေ၏ neuroimaging လေ့လာမှုများ (ဥပမာအဲဒီမှာတည်ရှိပေမယ့် ကုန်အမှတ်တံဆိပ် et al ။ , 2016a; Gola et al ။ , 2017; Klucken et al ။ , 2016; Schmidt က et al ။ , 2017; Voon et al ။ , 2014), မကြာသေးမီပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းအတွက်လေ့လာခဲ့ကြရာ (Kraus et al ။ , 2016; Stark et al ။ , 2018) ။ ဝယ်-စျေးဝယ်ရောဂါ၏အာရုံကြောဆက်စပ်၏သိပ္ပံဆိုင်ရာလေ့လာမှုများအတော်လေးရှားပါးဖြစ်ကြသည်။ စားသုံးသူစိတ်ပညာရှုထောင့်ကနေတချို့လေ့လာမှုတွေ (ဥပမာ, သို့သော်, ရှိပါတယ်, Raab et al ။ , 2011) နှင့်လေ့လာမှုများဝယ်-စျေးဝယ်ရောဂါ neurobiological ယန္တရားများစုံစမ်းစစ်ဆေးရန် electrophysiological အစီအမံကို အသုံးပြု. (Trotzke et al ။ , 2014) (မကြာသေးမီကပြန်လည်သုံးသပ်ခဲ့ကြရသောKyrios et al ။ , 2018; Trotzke et al ။ , 2017) ။ သို့သော်လည်းလက်တွေ့ခွအေနအေအဖြစ်အသိမှတ်မပြုပေမဲ့, လူမှုကွန်ယက်ဆိုဒ်များ၏ညံ့ဖျင်းထိန်းချုပ်ထားခြင်းနှင့်ပြဿနာအသုံးပြုမှုအခြေခံအဆောက်အဦးများနှင့်အလုပ်လုပ်တဲ့ neuroimaging တွေ့ရှိချက်များနှင့်အခြားအင်တာနက်ဆက်သွယ်ရေး applications များ (ဥပမာ, ပေါ်မကြာသေးမီကမြေားကိုလည်းရှိပါတယ် Dieter et al ။ , 2017; သူ et al ။ , 2017; Lemenager et al ။ , 2016; Montage et al ။ , 2017; Montage et al ။ , 2018; Turel & Qahri-Saremi, 2016), နေဖြင့်ပြန်လည်သုံးသပ်ခဲ့ကြရသော Wegmann et al ။ (2018a).
သိသာထင်ရှားသောပြောင်းလဲနိုင်သည်အကျိုးစီးပွားများ၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ Construction သို့မဟုတ်လုပ်ငန်းစဉ်များ, (ဥပမာဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ / အလုပ်လုပ်တဲ့သံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုပုံရိပ် [s / fMRI] positron ထုတ်လွှတ် tomography [PET]) ကိုနည်းစနစ်ကိုအသုံးပြု, အမူအကျင့်စှဲအမျိုးအစားများနှင့် ပတ်သက်. စွဲလမ်းအပြုအမူတွေ၏ neuroimaging လေ့လာမှုများကိုဖြတ်ပြီးရှိပါတယ် , တိကျသောလုပ်ငန်းဆောင်တာကိုတိုင်းတာဖို့အသုံးပြုစမ်းသပ်တာဝန်များကို, အနမူနာ (ဆေးပညာရောဂါတစ်ဦးချင်းစီသို့မဟုတ်ကုသမှု-ရှာကြံလူနာနှိုင်းယှဉ်လက္ခဏာတွေကွဲပြားခြားနားသောဒီဂရီဖေါ်ပြခြင်းတစ်ဦးချင်းစီနှင့်အတူအဆင်ပြေနမူနာ) နှင့်အသုံးပြုသည့်ရောဂါရှာဖွေလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများပါဝင်သည်။ အဆိုပါလေ့လာမှုများ, Meta-ဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းနှင့်သုံးသပ်ချက်များ (ဥပမာ, အထက်ကားအညွှန်းကိုကြည့်ပါ) ထဲကနေကောက်ချက်ဆွဲရသောအခါမည်သို့ပင်ဆိုစေကာ, ထိုအရပ်၌ amygdala နှင့် ventral striatum အပါအဝင် limbic အဆောက်အဦများ၏ hyperactive ပါဝင်ပတ်သက်မှုများအတွက်ပထမဦးဆုံးသက်သေအထောက်အထားဖြစ်တယ်, hypoactive prefrontal-striatal ဆားကစ်ပါဝင် အဆိုပါအပြုအမူအပေါ်သိမြင်မှုထိန်းချုပ်ရေးအတွက်။ အချို့အတွက်အသိပေးချက်ငွေကြေးဆိုင်ရာအပြောင်းအလဲနဲ့၏ anticipatory အဆင့်စဉ်အတွင်းဆုလာဘ် circuitry ၏သာဓက hypoactive ထိတွေ့ဆက်ဆံမှု (အဘို့, သို့သော်ရှိပါတယ်Balodis & Potenza, 2015)) အချို့သုတေသီများစွဲလမ်းတွေကိုများ၏အပြောင်းအလဲနဲ့သက်ဆိုင်သောကွဲပြားခြားနားမှု (hyperactive ဆုလာဘ်တုံ့ပြန်) နှင့် Non-စွဲလမ်းကြိုးတွေကို (အတော်လေး hypoactive ဆုလာဘ်တုံ့ပြန်အဆိုပြုနှင့်အတူ (Limbrick-Oldfield et al ။ , 2013) ။ အဆိုပါ insula (အတွင်းဆွေးနွေးမှုကိုတွေ့မြင်တဏှာနှင့်အထူးပြုမူဖို့အလိုဆန္ဒနှင့်ဆက်စပ်သည့် somatic ပြည်နယ်များကိုယ်စားပြုနှစ်ခုစနစ်များအကြားဖျန်ဖြေဖြစ် (limbic နှင့် prefrontal-striatal) စခွေငျးငှါ Namkung et al ။ , 2017; ဝေ et al ။ , 2017) ။ စွဲလမ်းစေအပြုအမူတွေ၏အလားအလာဦးနှောက်ဆက်စပ်မှုအဖြစ်ဖော်ထုတ်ခဲ့ကြကြောင်းအဆိုပါအဓိကအဆောက်အဦထဲမှာအကျဉ်းချုံးထားပါသည် သဖန်းသီး။ 3.
High-res ပုံရိပ် (316KB) Download
သဖန်းသီး။ 3။ ဦးနှောက်ဆားကစ်အလားအလာစွဲလမ်းအပြုအမူတွေကိုအခြေခံ။ လိမ္မော်ရောင်မြှားစွဲလမ်းဖြစ်စဉ်များ၏အစောပိုင်းအဆင့်တွင်ပါဝင်ပတ်သက်ခံရဖို့အဆိုပြုထားအဓိက circuitry ကိုယ်စားပြုသည်။ အပြာရောင်မြှားအပြုအမူတွေကိုပိုမိုလေ့ဖြစ်လာသောအခါစွဲဖြစ်စဉ်များ၏နောက်ပိုင်းတွင်အဆင့်ဆင့်အတွက် dorsal striatum နှင့်ဆက်စပ်အဆောက်အဦများ၏အပိုဆောင်းပါဝင်ပတ်သက်မှုဖော်ပြသည်။ ACC အပြုအမူတွေကိုကွပ်မျက်များအတွက် = anterior cingulate cortex, Am = amygdala, DLPFC = dorsolateral prefrontal cortex, DS = dorsal striatum, မိသားစုဆရာဝန် globus pallidus =, Hipp = hippocampus, Ins = insula, မော်တော် = မော်တာ cortex နဲ့ဆက်စပ်ဒေသများ, OFC = orbitofrontal cortex, Rap ဂီတ = serotonergic raphéအရေးပါ, SN = substantia nigra, Thal = thalamus, VMPFC = ventromedial prefrontal cortex, VS = ventral striatum, VTA = dopaminergic ventral tegmental ဧရိယာ။
အမူအကျင့်စွဲလမ်းနှင့်အတူလူနာနမူနာအတူ fMRI-လေ့လာမှုများအတွက် cue-reactivity ကို-related ဦးနှောက်လှုပ်ရှားမှု၏မကြာသေးမီ Meta-analysis သည်မှာတော့ထိန်းချုပ်မှုဘာသာရပ်များနှိုင်းယှဉ် (Starcke et al ။ , 2018), အ dorsal striatum (caudate နျူကလိယ) ကို cue-reactivity ကိုတာဝန်များကိုအတွက်ကြားနေခွအေနအေနှင့်အတူစွဲ-related ခွအေနအေခြားနားသည့်အခါမပါဘဲနှင့်စှဲနှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီအတွက်သူများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါစွဲလမ်းမှုကိုနှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီအတွက်ပိုပြီးတက်ကြွခဲ့သည်။ အဆိုပါတွေ့ရှိချက်အပြုအမူ (အသေးစိတ်လေ့ဖြစ်လာသောအခါ, ရောဂါ၏နောက်ပိုင်းတွင်အဆင့်ဆင့်အတွက် dorsal striatum ၏ပါဝင်ပတ်သက်မှုမှစွဲ-related လှုံ့ဆော်မှုနှင့်အတူရင်ဆိုင်ခံရသောအခါအမူအကျင့်စွဲလမ်း၏အစောပိုင်းအဆင့်ဆင့်အတွက် ventral striatum ၏ပါဝင်ပတ်သက်မှုကနေဆိုင်းရောင်ပြန်ဟပ်စေခြင်းငှါEveritt & Robbins, 2013, 2016; zhou et al ။ , 2019) ။ ဖြစ်နိုင်ဖွယ်အစောပိုင်းကနေစွဲဖြစ်စဉ်များ၏နောက်ပိုင်းတွင်အဆင့်ဆင့်မှစွဲလမ်းအပြုအမူတွေနဲ့ဆိုင်းအခြေခံကြောင်းအဆိုပါဦးနှောက်ဖွဲ့စည်းပုံနှင့်ဆားကစ်အတွက်သိထားရုပ်ပြနေကြတယ် သဖန်းသီး။ 3.
နံရံပစ်ကစားနည်း-striatal အဆောက်အဦများကြားတွင်ကျယ်ပြန့်ဆက်သွယ်မှုကျန်းမာဘာသာရပ်များနှင့်အတူငြိမ်ဝပ်ရာပြည်နယ် fMRI စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေကိုအသုံးပြုပြီးလေ့လာခဲ့ကြနှင့် (အမူအကျင့်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်တွင်ပါဝင်ပတ်သက်ရမည်ကိုပြသထားသည်မောရစ် et al ။ , 2016) ။ ဤရွေ့ကားဆားကစ်ကိုလည်းစိတ်လှုပ်ရှားမှုစည်းမျဉ်းများတွင်ပါဝင်ပတ်သက်အလုပ်လုပ်တဲ့ကွန်ရက်များ (နှင့်အတူကျယ်ပြန့်တသမတ်တည်းများမှာအားစိုက်ရသော, 2018) ။ နံရံပစ်ကစားနည်း-striatal ဆားကစ်တွင်ပါဝင်ပတ်သက်တိကျတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအကြားဆက်သွယ်မှုအတွက်အပြောင်းအလဲများ (amygdala နှင့် PFC medial အကြားဥပမာဆက်သွယ်မှု) (ပစ္စည်းဥစ္စာ-အသုံးပြုမှုမမှန်အတွက်စိတ်လှုပ်ရှားမှု dysregulation ရှင်းပြအတွက်အရေးကြီးသောပေါ်လာKoob, 2015; Wilcox et al ။ , 2016) ။ အဆိုပါသိမြင်မှုထိန်းချုပ်ရေးအတွက်ပါဝင်ပတ်သက်ကွန်ရက်ဆက်သွယ်မှု (နံရံပစ်ကစားနည်း-parietal ဆားကစ်နှင့်တိုကျရိုကျဒေသများ medial) နှင့် (subcortical နှင့် limbic အဆောက်အဦများအပါအဝင်) ဆုလာဘ်အပြောင်းအလဲနဲ့တွင်လည်း (ကုသမှုအပြီးတွင်ကင်း-အသုံးပြုမှုရောဂါအတွက် abstinence ကြိုတင်ခန့်မှန်းဖို့ပြသထားသည်yip et al ။ , 2019) ။ အလုပ်အမှုဆောင်ထိန်းချုပ်မှုနှင့်ဆုလာဘ် sensitivity ကိုပါဝင်ပတ်သက်နှစ်ခုကွန်ရက်တစ်ဦးကအားကောင်းခွဲခြာ (ပိုကောင်းတဲ့ကုထုံးရလဒ်များရှင်းပြရသော, အမူအကျင့်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်အခြေခံမှအဆိုပြုထားနှင့် compulsive လျော့နည်းသွားခဲ့ပြီးyip et al ။ , 2019).
အကျဉ်းချုပ်တှငျကြှနျုပျတို့အမူအကျင့်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ခြင်းနှင့်စိတ်လှုပ်ရှားမှု / တတ်ပြီးစည်းမျဉ်းအခြေခံဆားကစ်တစ်ခုမညီမမျှစွဲလမ်းအပြုအမူတွေ၏အဓိကရှုထောင့်မှဆက်စပ်ကြောင်းတင်ပြသည်။ အဆိုပါလမ်းကြောင်း (prefrontal ဒေသများ (အဓိကအားဖြင့် orbitofrontal ဒေသများ) သို့ dopaminergic ဒေသများ prefrontal ဖို့ ventral tegmental ဧရိယာနှင့် substantia nigra ထံမှစီမံချက်များ, အ ventral striatum နှင့် anterior cingulate gyrus အဖြစ်raphéအရေးပါထံမှ serotonergic စီမံချက်များပါဝင်ပါသည်Everitt & Robbins, 2005; Volkow et al ။ , 2012; Volkow et al ။ , 2013) ။ striatal အဆောက်အဦများ, thalamus, နှင့် prefrontal ဒေသများအကြား Interconnection (အဓိကအားဖြင့်အချိုမှုများနှင့် gamma-aminobutyric အက်ဆစ် (ဂါဘမြို့သား) တို့အပေါ်မှာမူတည်Naaijen et al ။ , 2015), နှင့်နံရံပစ်ကစားနည်း-striatal ကွင်းများတွင်ပါဝင်ပတ်သက်သည့် neurochemical စနစ်များ (ပူပေါင်းနှင့် Cross-စည်းမျဉ်းဖက်ရှင်တွေလုပျဆောငျGleich et al ။ , 2015) ။ စှဲ Neurochemical ဆက်စပ်မှုပြင်းထန်စွာတခြားနေရာကိုဆှေးနှေးခဲ့ကြနှင့်များစွာသောလေ့လာမှုတွေ (ပစ္စည်းဥစ္စာ-အသုံးပြုမှုမမှန်အတွက် dopamine ၏အရေးကြီးသောအခန်းကဏ္ဍအလေးပေးပြောကြားHerman & ရောဘတ်, 2015; Pascoli et al ။ , 2018; Volkow et al ။ , 2016) ။ အမူအကျင့်စွဲလမ်းအတွက် dopamine ကိုရည်မှတ်တွေ့ရှိချက် (သို့သော်လျော့နည်းကြံ့ခိုင်များမှာPotenza, 2018).
အမူအကျင့်စွဲလမ်း၏အာရုံကြောဆက်စပ်အပေါ်လေ့လာမှုများတစ်အဓိပ္ပါယ်ရှိသောအရေအတွက်ကမကြာသေးမီနှစ်များအတွင်းထုတ်ဝေခဲ့ကြပေမဲ့, ဖော်ပြခဲ့တဲ့သင့်ကြောင်းန့်အသတ်ရှိရှိနေဆဲဖြစ်ပါသည်။ ပထမဦးစွာအများဆုံးလေ့လာမှုများ (အထကျမှတ်ချက်များကိုကြည့်ပါ) လောင်းကစားဝိုင်းရောဂါနှင့်ဂိမ်းကစားခြင်းရောဂါအပေါ်ထုတ်ဝေခဲ့ကြသည်။ ဒီထက်သက်သေအထောက်အထားရောဂါ-စျေးဝယ်ဝယ်ယူပြဿနာညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုအပါအဝင် compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေအပါအဝင်အခြားအမူအကျင့်စွဲလမ်းမှုကိုအဘို့တည်ရှိကြောင်းနှင့်ယင်းကဲ့သို့လူမှုရေး-ကွန်ယက်ကိုက်ဘ်ဆိုက်များ၏ပြဿနာကိုအသုံးပြုခြင်းအဖြစ်သေးလက်တွေ့အခြေအနေများအဖြစ်အသိအမှတ်ပြုကြသည်မဟုတ်သောအခြားအလားအလာဖြစ်ရပ်။ အထူးသဖြင့်, စနစ်တကျအမူအကျင့်စွဲလမ်း၏တိကျသောအမျိုးအစားများကိုဖြတ်ပြီးသီးခြားစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်ချက်များကို (ဥပမာ, တဏှာ, inhibitory ထိန်းချုပ်မှု) ၏အာရုံကြောဆက်စပ်စုံစမ်းစစ်ဆေးရန်ကြောင်းလေ့လာမှုများပျောက်ဆုံးလျက်ရှိသည်။ လေ့လာရေးခန့်မှန်းအဖြစ်စွဲဖြစ်စဉ်များသို့မဟုတ်လက္ခဏာပြင်းထန်မှု၏အဆင့်ဆင့်စုံစမ်းစစ်ဆေးသို့မဟုတ်အာရုံကြောလှုပ်ရှားမှု variable တွေကိုစိစစ်ခြင်းနှင့်အလားအလာရှိသောအခြေခံအဆောက်အဦးနှောက်မူမမှန်ပိုကောင်းစွဲလမ်းအပြုအမူတွေ၏တိုးတက်မှုအခြေခံယန္တရားကိုနားလည်သဘောပေါက်ရန်အရေးကြီးပါသည်။ ဤတသမတ်တည်း, တိကျတဲ့ယူဆချက်စမ်းသပ်ရန်ကြောင်းစွဲလမ်းအပြုအမူတွေ၏ဦးနှောက်ဆက်စပ်မှုအပေါ် longitudinal လေ့လာမှုများပျောက်ဆုံးလျက်ရှိသည်။ , အမူအကျင့်စှဲအမျိုးအစားများကိုဖြတ်ပြီးနှင့်စွဲလမ်း၏ကွဲပြားခြားနားသောအဆင့်ကိုဖြတ်ပြီးစွဲ-related တွေကိုတုံ့ပြန်အဖြစ် dorsal striatum ဖို့ ventral ၏လှုပ်ရှားမှုအနေဖြင့်အလားအလာရှိသောပြောင်းကုန်ပြီစုံစမ်းစစ်ဆေး Cross-Section နှင့် longitudinal နှစ်ဦးစလုံးဒီဇိုင်းများသုံးပြီးပိုကောင်းစွဲလမ်း၏သဘောသဘာဝကိုနားလည်သဘောပေါက်ရန်ကူညီမည်ဖြစ်ကြောင်း အပြုအမူ။ ထိုကဲ့သို့သောလေ့လာမှုများ compulsion မှစွဲလမ်းထဲကနေနှင့်အလှည့်အတွက်ကုသမှုအကောင်းဆုံးအတွက်ကိုကူညီသင့်သောအမူအကျင့်စွဲလမ်း၏ကွဲပြားခြားနားသောအဆင့်စွဲ-related လှုံ့ဆော်မှု, ရင်ဆိုင်သည့်အခါအနုတ်လက္ခဏာပြည်နယ်များအနေဖြင့်ကယ်ဆယ်ရေးမျှော်လင့်ဖို့ဆန္ဒပြည့်မျှော်လင့်ထံမှအလားအလာဆိုင်း disentangle ရန်လိုအပ်သောဖြစ်ကြသည်။ စွဲလမ်းစေအပြုအမူတွေနဲ့အလားအလာ longitudinal လေ့လာမှုများအပါအဝင်စွဲဖြစ်စဉ်များ၏ကွဲပြားခြားနားသောအဆင့်အမျိုးမျိုးနှိုင်းယှဉ်လေ့လာမှုများကိုလည်းယူဆချက်တစ်ခုအားနည်းချက်အချက်အဖြစ်နှင့် / သို့မဟုတ်စွဲလမ်းအပြုအမူတွေ၏အကျိုးဆက်အဖြစ် inhibitory ထိန်းချုပ်လျှော့ချ၏ပါဝင်ပတ်သက်မှုနှင့်အကျိုးသက်ရောက်စေအကြားလင့်များဖျန်ဖြေခြင်းအလိုငှါတဦးတည်းစုံစမ်းစစ်ဆေးနိုင် တုံ့ပြန်မှုနှင့်လေ့ / compulsive အပြုအမူတွေကို (အတွင်းဆွေးနွေးမှုကိုတွေ့မြင် Everitt & Robbins, 2016).
4 ။ နိဂုံးနှင့်အနာဂတ်လမ်းညွန်
အဆိုပါ updated ငါ-PACE မော်ဒယ်ပစ္စည်းဥစ္စာ-အသုံးပြုမှုမမှန်ခြင်းနှင့်အမူအကျင့်စွဲလမ်း၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် neuroscientific သီအိုရီပေါင်းစပ်ပြီးအားဖြင့်စွဲလမ်းအပြုအမူတွေ၏ဖြစ်စဉ်ကိုဖော်ပြများအတွက်သီအိုရီချဉ်းကပ်မှုဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ပြောင်းလဲနေသောဖြစ်ခြင်းနှင့်တိကျသောအပြုအမူအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှု၏အကျိုးဆက်အဖြစ်အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှဖွံ့ဖြိုးစေခြင်းငှါအရာ, စွဲလမ်းအပြုအမူတွေကြောင့်ပုံမမှန်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး၏အဓိကလက္ခဏာများနှင့်အများအပြားကိုစိစစ်ခြင်းနှင့်ဖြန်ဖြေ variable တွေကိုအကြားအပြန်အလှန်၏အကျိုးဆက်ဖြစ်ခြင်းစဉ်းစားပါ။ ကျနော်တို့ကအမူအကျင့်စွဲလမ်း၏လက္ခဏာပြင်းထန်မှုအတွက်ကှဲလှဲရှင်းပြအတွက်တိကျတဲ့ variable တွေကိုများ၏အပြန်အလှန်သက်ရောက်မှုနှင့် ပတ်သက်. ရှင်းရှင်းလင်းလင်းယူဆချက်ဖွဲ့စည်းရေးနှင့်စမ်းသပ်ခြင်းခွင့်ပြုထားသောကြောင့်, စွဲလမ်းအပြုအမူတွေ၏ငါ-PACE မော်ဒယ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် neuroscientific သုတေသနများအတွက်အသုံးဝင်သောဖြစ်မည်အကြောင်းတင်ပြသည်။ အဆိုပါမော်ဒယ်လည်းလက်တွေ့အလေ့အကျင့် ( cf. လာအောင်နှိုးဆွစေခြင်းငှါ ရှငျဘုရငျ et al ။ , 2017; Potenza, 2017) ကုသမှုများအတွက်အရေးကြီးသောပစ်မှတ် (အစပျိုးခြင်းမှဥပမာကိုမျှော်လင့်, ထိခိုက်စေခြင်းနှင့်သိမြင်မှုတုံ့ပြန်မှု) ကိုကိုယ်စားပြုစေခြင်းငှါဖြစ်နိုင်သမျှဖျန်ဖြေ variable တွေကို defining နှင့်စုံစမ်းစစ်ဆေးဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ အဆိုပါ updated ငါ-PACE မော်ဒယ်လည်းသတ်သတ်မှတ်မှတ် inhibitory-ထိန်းချုပ်မှုလျှော့ချစွဲဖြစ်စဉ်များ၏တိုးတက်မှုအတွက်နောက်ပိုင်းမှာအဆင့်အရှိန်အဟုန်မြှင့်ကြောင်းငြင်းခုံခြင်းဖြင့်ဥပမာ, (နှစ်ဦးစလုံးတိုးတက်မှုနှင့်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးကာလအတွင်း) စွဲလမ်းဖြစ်စဉ်များများ၏အဆင့်ပေါ်ယူဆချက် deriving များ၏ဖြစ်နိုင်ခြေပေးထားပါတယ်။ ဒါဟာကျနော်တို့ပြောင်းလဲနေသောအဖြစ်သီအိုရီမော်ဒယ်များထည့်သွင်းစဉ်းစားကြောင်း, သို့သော်သတိပြုပါရန်အရေးကြီးပါသည်။ တစ်သီအိုရီမူဘောင်ထဲမှာပေါင်းစပ်တိကျတဲ့ယူဆချက်များ၏တရားဝင်မှု, မျက်မြင်လက်တွေ့အကဲဖြတ်ရပါမည်နှင့်သီအိုရီမော်ဒယ်များကွဲပြားခြားနားသောအမြင်များကနေမကြာသေးမီကသိပ္ပံနည်းကျတွေ့ရှိချက်စဉ်းစားခြင်းဖြင့် updated ရပါမည်။
အဘယ်အရာကိုစိတ်တွင်ထားရန်အရေးကြီးပါသည်ယင်းသီအိုရီမော်ဒယ်အဆိုပြုထားစွဲလမ်းအပြုအမူတွေကိုရိုသေလေးစားမှုနှင့်အတူသိပ္ပံနည်းကျသက်သေအထောက်အထား၏ကွဲပြားခြားနားသောဒီဂရီအပေါ်အခြေခံပြီးကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ ယခင်အပိုင်းတှငျဖျောပွထားသကဲ့သို့ပင်, တိကျတဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာယန္တရားများနှင့် neurobiological ဖြစ်စဉ်များများ၏ပါဝင်ပတ်သက်မှုအတော်လေးကောင်းစွာလောင်းကစားဝိုင်းရောဂါနှင့်ဂိမ်းကစားခြင်းရောဂါအတွက်လေ့လာခဲ့သည်နှင့်လျော့နည်းပြင်းထန်စွာဝယ်ယူ-စျေးဝယ်ဥပမာညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုများအတွက်, အလားအလာစွဲလမ်းဖြစ်လာကြောင်းအပြုအမူတွေ၏အခြားအမျိုးအစားများအတွက်စုံစမ်းစစ်ဆေးနှင့်လူမှုရေး -networking ။ ထို့ပြင် updated ငါ-PACE မော်ဒယ်အတွက်အဆိုပြုထားသောအချို့သောရှုထောင့်နှင့်ယန္တရားများအဘို့, သက်သေအထောက်အထားများကွဲပြားခြားနားသောအဆင့်ဆင့်တည်ရှိ။ အလုပ်အမှုဆောင်လုပ်ဆောင်ချက်များကိုနှင့် inhibitory ထိန်းချုပ်မှုများအတွက်လေ့လာမှုများတစ်အတော်လေးကြီးမားအရေအတွက်ကစမ်းသပ် Paradigm ကိုအသုံးပြုထားပြီးစွဲလမ်းအပြုအမူတွေအမျိုးမျိုးအတွက်အလုပ်အမှုဆောင်လုပ်ငန်းဆောင်တာများအထူးသဖြင့်ရှုထောင့်လေ့လာခဲ့သည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, တိကျတဲ့စွဲလမ်းအပြုအမူတွေအတွက် cue-reactivity ကိုနှင့်တဏှာသည်, (အချို့လေ့လာမှုများကြောင်းကျိုးဆက်စပ်၏အဓိပ္ပာယ်ကောက်ယူစေသည်တစ်ခုဆက်စပ်မှုဒီဇိုင်းလျှောက်ထားခြင်းနှင့်သတ်မှတ်ပေးရန်စွဲလုပ်ငန်းစဉ်များတွင် cue-reactivity ကိုနှင့်တဏှာ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏အချိန်ကိုခက်ခဲZilberman et al ။ , 2019) ။ ဤအကန့်သတ်စဉ်းစားကမော်ဒယ်အဆိုပြုထားသည်ဟုအလေးပေးဖို့အရေးကြီးပါတယ်လက်ရှိ State-Of-The-Art အပြုအမူစွဲသုတေသန၏အကျဉ်းချုပ်နှင့်သီအိုရီ-based အနာဂတ်လေ့လာမှုများဖှယျမှာရည်ရွယ်ထားတဲ့သီအိုရီမော်ဒယ်ဖြစ်ပါတယ်။
ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်အရေးကြီးပါသည်ကြောင်းနောက်ထပ်ပြဿနာ (ဤ variable တွေကိုအများအပြား psychopathologies တွင်ပါဝင်ပတ်သက်သည်ဟုပေးထားသောကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးနှင့်စိတ်ထား features တွေသတ်သတ်မှတ်မှတ်စွဲလမ်းအပြုအမူတွေများအတွက်မဟုတ်ဘဲမရေခန့်မှန်းကြသည်သည်နှင့်မကြာခဏကွဲပြားခြားနားသောရောဂါများကိုဖြတ်ပြီးလက္ခဏာတွေသာပျော့-to-အလယ်အလတ်အချိုးအစားကိုရှင်းပြZilberman et al ။ , 2018).
ငါတို့သည်လည်းချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့-ထိန်းချုပ်မှုမမှန်အဖြစ်သို့မဟုတ်အပြုအမူစှဲအဖြစ်ဝယ်-စျေးဝယ်ရောဂါနှင့်ညစ်ညမ်း-အသုံးပြုမှုရောဂါခွဲခြားရန်ရိုသေလေးစားမှုနှင့်အတူလက်ရှိဆွေးနွေးငြင်းခုံပေါ်မှတ်ချက်ပေးရန်ချင်ပါတယ်။ အဆိုပါ ICD-11 ချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့-ထိန်းချုပ်မှုမမှန်များ၏အမျိုးအစားအတွင်းအတင်းအကျပ်ပြုတတ်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူရောဂါများထဲမှအကောင်အထည်ဖော်မည်ဟုဆိုသည်အဖြစ်ပြဿနာညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုပါဝင်သည်။ ဝယ်-စျေးဝယ်ရောဂါ (ထို ICD-11 coding tool ကိုအခြားသတ်မှတ်ထားသောချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့-ထိန်းချုပ်မှုမမှန်ဘို့ဥပမာတစ်ခုအဖြစ်စာရင်းဝင်ဖြစ်ပါတယ်ကမ္ဘာ့ဖလား-ကျန်းမာရေး-အဖွဲ့, 2019) ။ အတော်များများကသုတေသီများ, သို့သော်, (မမှန်နှစ်ခုစလုံးအမျိုးအစားများကိုပိုမိုကောင်းမွန်စွဲလမ်းအပြုအမူတွေအဖြစ်ခွဲခြားမည်ဖြစ်ကြောင်းငြင်းPotenza et al ။ , 2018).
အနာဂတ်သုတေသနနှင့်သီအိုရီအဆောက်အဦများအတွက်တစ်ခုမှာစိန်ခေါ်မှုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် neurobiological အပေါ်အမူအကျင့်စွဲလမ်းမှုကိုဆက်စပ်ရသောစွဲလမ်းအပြုအမူတွေနဲ့အခြားစိတ်ရောဂါ, ထိုကဲ့သို့သော obsessive-compulsive-related သကဲ့သို့ချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့-ထိန်းချုပ်မှုပုံမမှန်မှုကြောင့်မမှန်အကြားအလားအလာဆင်တူရိုးမှားများနှင့်ကွဲပြားမှု, ဖော်ထုတ်နှင့် disentangling ကပါဝင်ပတ်သက် အဆင့်ဆင့် (ချိန်ဘာလိန် et al ။ , 2016; Fineberg et al ။ , 2013; Fineberg et al ။ , 2018; Robbins et al ။ , 2019) ။ ဥပမာအားဖြင့်, inhibitory ထိန်းချုပ်မှုနှင့်ဆုလာဘ်အပြောင်းအလဲနဲ့လည်းနံရံပစ်ကစားနည်း-striatal ဦးနှောက်၏လုပ်ငန်းဆောင်တာနှင့်ဆက်စပ်သောခဲ့ကြရာဤကဲ့သို့သောအသားအရေ-ကောက်နေရောဂါနှင့် trichotillomania ထဲမှာဆွေးနွေးထားတဲ့အတိုင်း obsessive-ဆက်စပ်-compulsive နှင့်ချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့-ထိန်းချုပ်မှုမမှန်, အတွက်အရေးကြီးသောဖြစ်အဆိုပြုထားပြီ ဆားကစ် (ချိန်ဘာလိန် et al ။ , 2008) ။ နံရံပစ်ကစားနည်း-striatal ကွင်း၏အလုပ်မဖြစ်, သို့သော်, အဖြစ်ကောင်းစွာမျိုးစုံနဲ့အခြားစိတ်ကျန်းမာရေးချို့ယွင်းတွင်ပါဝင်ပတ်သက်စေခြင်းငှါ (Mitelman, 2019) ။ မည်သို့ပင်ဆိုစေ, နံရံပစ်ကစားနည်း-striatal ကွင်းကွဲပြားခြားနားသောစိတ်ရောဂါတွင်ပါဝင်ပတ်သက်နေကြသည်ဟူသောအချက်ကိုသေချာပေါက်ရောဂါများ၏လက်တွေ့ phenotypes နှင့်ဆက်စပ်သောစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖြစ်စဉ်များတူညီဖြစ်ကြောင်းမဆိုလိုပါ။ ပထမဦးစွာနံရံပစ်ကစားနည်း-striatal ကွင်းကွဲပြားခြားနားလေ့လာမှုများကိုဖြတ်ပြီးသတ်မှတ်နှင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာကြသည်။ အနာဂတ်လေ့လာမှုများကိုပိုမိုနီးကပ်စွာလက်ရှိကျယ်ပြန့်တိကျတဲ့ပြဿနာအပြုအမူတွေကိုအခြေခံအချို့တိကျသောစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖြစ်စဉ်များမှနံရံပစ်ကစားနည်း-striatal ကွင်းအတွင်းသတ်မှတ်ထားသောအဆောက်အဦများ၏တိကျသောပံ့ပိုးမှုများကိုဆနျးစစျသငျ့သညျ။ ဒုတိယအချက်မှာ inhibitory ထိန်းချုပ်မှုနှင့်ဆုလာဘ်အပြောင်းအလဲနဲ့၏အထွေထွေပါဝင်ပတ်သက်မှု Impulse / compulsive နှင့်စွဲလမ်းအပြုအမူတွေ (ဥပမာအချို့ထပ်တူရှိစေခြင်းငှါပေမဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်များ, မမှန်ကိုဖြတ်ပြီးနှိုင်းယှဉ်ဖြစ်ကြောင်းဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူး ချိန်ဘာလိန် et al ။ , 2018) ။ ဒါဟာပိုပြီးတိကျစွာတိကျတဲ့အပြုအမူတွေအတွက်အလွန်အကျွံထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့လူများအတွက်တွန်းအား၏ယာယီတိုးတက်မှုအခြေခံအချက်များသတ်မှတ်ရန်အရေးကြီးပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့်, စွဲလမ်းအပြုအမူတွေအတွက်ကအဓိကတွန်းအားဂိမ်းကစားခြင်းသို့မဟုတ်လောင်းကစားအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့ဖြစ်သည်အနည်းဆုံးအစောပိုင်းအဆင့်မှာဆုလာဘ်မျှော်လင့်ပါဝင်လိမ့်မည်။ နောက်ပိုင်းမှာအဆင့်မှာတော့အနုတ်လက္ခဏာခံစားချက်တွေကိုရှောင်ရှားနိုင်ဖွယ်ဒါ့အပြင်ပါဝင်ပတ်သက်သည်။ obsessive-compulsive-related မမှန်မှာ, အစောပိုင်းအဆင့်မှာ core ကို drive ကိုအပျက်သဘောခံစားချက်တွေကိုသို့မဟုတ်စိုးရိမ်စိတ်များရှောင်ရှားခြင်းပါဝငျကွောငျးဖြစ်နိုင်သည်။ ဒါကြောင့်စိတ်ဖိစီးမှုသက်သာရာကူညီပေးနိုငျသောကွောငျ့နောက်ပိုင်းတွင်အပြုအမူသူ့ဟာသူအလားအလာကြိုးအဖြစ်ကြုံတွေ့နိုင်ပါသည်။ တနည်းအားဖြင့်တိကျသော neurocognitive လုပ်ဆောင်ချက်များကို၏အထွေထွေပါဝင်ပတ်သက်မှုလုံးဝတဲ့ရောဂါရှင်းပြနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ တူညီတဲ့စိတ်ကူးအလားအလာအာရုံကြောယန္တရားများသက်ဆိုင်သည်။ ဒါဟာစွဲလမ်းအပြုအမူတွေကြောင့်ပုံမမှန်ထဲမှာ, ventral striatum cue-reactivity ကိုနှင့်တဏှာမှလေးစားမှုနှင့်တကွ, ရောဂါ၏အစောပိုင်းအဆင့်မှာအရေးကြီးအထောက်အကူပြုသောအမှုဖြစ်နိုင်သည်။ နောက်ပိုင်းမှာအဆင့်မှာ dorsal striatum ပိုပြီးပါဝင်ပတ်သက်ဖြစ်လာနိုင်ပြီးစွဲလမ်းမမှန်၏လေ့နှင့် compulsive ရှုထောင့်မှဆက်စပ်။ ဆနျ့ကငျြဘ၌, dorsal striatum ဖွယ်ရှိအစောပိုင်းအဆင့် (ထံမှထိုကဲ့သို့သော trichotillomania အဖြစ်, obsessive-compulsive-related မမှန်ခြင်းနှင့်အလိုအလျောက်ထိန်းချုပ်မှုမမှန်တွင်ပါဝင်ပတ်သက်နေသည်Isobe et al ။ , 2018; ဗန်တွင်း Heuvel et al ။ , 2016).
အနာဂတ်လေ့လာမှုများမှာ, အမူအကျင့်ဖြစ်ရပ်များ၏အခြေခံသဘောသဘာဝပိုကောင်းတဲ့နားလည်မှုအောင်မြင်ရန်အလို့ငှာစွဲလမ်းအပြုအမူတွေအမျိုးမျိုးအတွက်ကွဲပြားခြားနားသော neurocognitive လုပ်ဆောင်ချက်များကို၏လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်အပြန်အလှန်စုံစမ်းစစ်ဆေးရန်ရန်အရေးကြီးပါသည်ပုံရသည်။ အဆိုပါငါ-PACE မော်ဒယ်ကဤဖြစ်ရပ်သုတေသနအတွက်တိကျတဲ့ယူဆချက် defining နှင့်ရှင်းလင်းထားသည့်အတွက်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ဒါဟာစွဲလမ်းအပြုအမူတွေအတွက်ယူဆချက်ဖြစ်စဉ်များဆန်းစစ်နှင့်ပတ်သက်သည့်အခြေခံလုပ်ငန်းစဉ်များကွဲပြားခြားနားသောသို့မဟုတ်အလားတူရှိမရှိနားလည်ရန်အခြားအစိတ်ပိုင်းထိုကဲ့သို့သော obsessive-compulsive-related အဖြစ်ပုံမမှန်ခြင်း, ချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့-ထိန်းချုပ်မှုမမှန်သူတို့နှင့်အတူနှိုင်းယှဉ်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ ဤလုပ်ငန်းစဉ်များတွင်ထုတ်ပေး data တွေကိုကွဲပြားခြားနားသောအသုံးအနှုန်းများသည်လက်ရှိတွင်မမှန်ဖြတ်ပြီးအလားတူယန္တရားများဖော်ပြဘို့အလုပ်ခံရနိုငျသောအတိုင်းအတာရှင်းလင်းကူညီသင့်ပါတယ်။ ဒီထုံးစံမှာငါ-PACE မော်ဒယ်များ၏ updated version ကို ပို. ပို. သက်ဆိုင်ရာဖြစ်လာရသောအင်တာနက်အသုံးပြုမှုနှင့်စပ်လျဉ်းသူများအပါအဝင်စွဲလမ်း, obsessive-compulsive, ချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့-ထိန်းချုပ်မှုများနှင့်အခြားရောဂါများနှင့်စပ်လျဉ်းသည့်အဓိကမေးခွန်းများကို, ဖြေရှင်းကူညီသင့်ကြောင်းတစ်သီအိုရီမူဘောင်ကိုထောက်ပံ့ပေး အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာကိုပတ်ဝန်းကျင်ပြောင်းလဲမှုများပေးတော်မူ၏။
အဆိုပါစာရေးဆရာသူတို့အကျိုးစီးပွားမျှပဋိပက္ခရှိသည်သောကြေညာ။ ဒေါက်တာအမှတ်တံဆိပ် (Duisburg-အက်ဆင်း၏တက္ကသိုလ်) မှထောက်ပံ့ငွေလက်ခံရရှိခဲ့သည် ဂျာမန်သုတေသနဖောင်ဒေးရှင်း (DFG), အ သုတေသနနှင့်ပညာရေးဂျာမန်ဖက်ဒရယ်န်ကြီးဌာန, အ ကနျြးမာရေးအတှကျအဂျာမန်ဖက်ဒရယ်န်ကြီးဌာန, ပြီးနောက် ဥရောပသမဂ္ဂ။ ဒေါက်တာအမှတ်တံဆိပ်အများအပြားအေဂျင်စီများများအတွက်ထောက်ပံ့ကြေးပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းဖျော်ဖြေမူပြီ ဂျာနယ်ကဏ္ဍများနှင့်ဆောင်းပါးများကိုတည်းဖြတ်တော်မူပြီ လက်တွေ့သို့မဟုတ်သိပ္ပံနည်းကျနေရာများအတွက်ပညာရေးဆိုင်ရာပို့ချချက်အားပေးတော်မူပြီ; နှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးကျမ်း၏ကြေညာသူအဘို့စာအုပ်တွေသို့မဟုတ်စာအုပ်အခန်းကြီးထုတ်ပေးလျက်ရှိသည်။ ဒေါက်တာ Potenza ထံမှထောက်ခံမှုအားလက်ခံတွေ့ဆုံ NIH (R01 DA039136, R01 DA042911, R01 DA026437, R03 DA045289, R21 DA042911နှင့် P50 DA09241), ပု စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးနှင့်စွဲန်ဆောင်မှုများ၏ Connecticut ဦးစီးဌာန, အ ပြဿနာလောင်းကစားအပေါ် Connecticut ကောင်စီ နှင့် တာဝန်ရှိဂိမ်းများအတွက်အမျိုးသားရေးစင်တာ။ ဒေါက်တာ Potenza ဘို့တိုင်ပင်ခြင်းနှင့် Rivermend ကျန်းမာရေး, Opiant / Lakelight ဟော်မုန်းနှင့်ဂျက်ဇ်ဂီတဆေးဝါးအကြံပေးတော်မူပြီ အဆိုပါ Mohegan Sun ကကာစီနိုများနှင့်တာဝန်ရှိဂိမ်းများအတွက်အမျိုးသားစင်တာမှ (ယေးလ်မှ) သုတေသနထောက်ပံ့မှုကိုလက်ခံရရှိ; အဘို့တိုင်ပင်သို့မဟုတ်ထိန်းချုပ်မှုများနှင့်စွဲလမ်းအပြုအမူတွေ impulse နှင့်ဆက်စပ်သောကိစ္စရပ်များအပေါ်ဥပဒေနှင့်လောင်းကစားဝိုင်းအဖွဲ့အစည်းများအကြံပြု; ချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့ထိန်းချုပ်နှင့်စွဲလမ်းအပြုအမူတွေနှင့်ဆက်စပ်သောထောက်ပံ့လက်တွေ့စောင့်ရှောက်မှု, ဖျော်ဖြေထောက်ပံ့ကြေးပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း; edited ဂျာနယ်များ / ဂျာနယ်ကဏ္ဍများ; ခမ်းနားကျည်အတွက်ပညာရေးဆိုင်ရာပို့ချချက်, CME ဖြစ်ရပ်များနှင့်အခြားလက်တွေ့ / သိပ္ပံကွင်းပေးထား; နှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးကျမ်း၏ကြေညာသူအဘို့စာအုပ်တွေသို့မဟုတ်အခန်းကြီး generated ။
ကျနော်တို့ကျေးဇူးတင်စရာသည့် updated မော်ဒယ်ဖှယျခဲ့ပြီးသောငါ-PACE မော်ဒယ်များ၏အစောပိုင်းဗားရှင်းဒေါက်တာ Kimberly အက်စ်လူငယ်တို့၏ဉာဏပံ့ပိုးမှုများကိုအသိအမှတျပွု။ ဒေါက်တာ Young ကဖေဖော်ဝါရီလ 2019 အတွက်ကွယ်လွန်သွားခဲ့သည်။ ဒေါက်တာ Kimberly အက်စ်လူငယ်တို့၏မှတ်ဉာဏ်ထဲမှာကျနော်တို့သူမ၏ရန်ဤဆောင်းပါးရည်စူးပါသည်။
Alvarez-Monjaras et al ။ , 2018
အမ် Alvarez-Monjaras, LC Mayes, MN Potenza, HJV ရပ်သဖော့ဒစှဲတဲ့ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာမော်ဒယ်: attachment ကို၏မှန်ဘီလူးမှတဆင့် neurobiological နှင့်ဆိုက်ကိုဒိုင်းနမစ်သီအိုရီပေါင်းစပ်ခြင်း
ပူးတွဲပါ & လူ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု (2018), စစ။ 1-22, 10.1080 / 14616734.2018.1498113
ယားစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောဂါများ၏ diagnostic နှင့်စာရင်းအင်းလက်စွဲစာအုပ်
(5th Edition ကို), ယား, ဝါရှင်တန်ဒီစီ (2013)
Argyriou et al ။ , 2017
အီး Argyriou, သမဝါယမ Davison, TTC Lee ကတုန့်ပြန်တားစီးနှင့်အင်တာနက်ဂိမ်း Disorder: Meta-analysis သည်
စွဲလမ်းစေအပြုအမူ, 71 (2017), စစ။ 54-60, 10.1016 / j.addbeh.2017.02.026
Baggio et al ။ , 2018
အက်စ် Baggio, V. Starcevic, ဂျေ Studer, O. ရှိမုန်သည် SM Gainsbury, G. အ Gmel, ဂျေ Billieuxတစ်ဦးကကွန်ယက်ကိုရှုထောင့်: နည်းပညာ-mediated စွဲလမ်းအပြုအမူတွေဆက်စပ်သေးကွဲပြားသောအခြေအနေများတစ်ရောင်စဉ်ဖွဲ့စည်း
ကိုစှဲအပြုအမူ, 32 (2018), စစ။ 564-572 ၏စိတ်ပညာ 10.1037 / adb0000379
Balodis နှင့် Potenza, 2015
IM Balodis, MN Potenzaစွဲလူဦးရေအတွက် Anticipatory ဆုလာဘ်အပြောင်းအလဲနဲ့: အငွေကြေးဆိုင်ရာမက်လုံးပေးနှောင့်နှေးတာဝန်အပေါ်တစ်ဦးကအာရုံစိုက်
ဟားဗတ်, 77 (2015), စစ။ 434-444, 10.1016 / j.biopsych.2014.08.020
A. အ Becharaဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ခြင်း, ချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့ထိန်းချုပ်နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးများကိုတှနျးလှနျ willpower ဆုံးရှုံးမှုမြား: A neurocognitive ရှုထောင့်
သဘာဝတရားအာရုံကြောသိပ္ပံ, 8 (2005), စစ။ 1458-1463, 10.1038 / nn1584
KC Berridge, TE ရော်ဘင်ဆင်, JW Aldridgeချက်ကိုပိုင်းခြားစိတ်ဖြာဆုလာဘ်၏အစိတ်အပိုင်းများ: 'Like', 'လို' နှင့်သင်ယူမှု
ဆေးဝါးဗေဒ,9(2009), စစအတွက်လက်ရှိ Opinions ။ 65-73, 10.1016 / j.coph.2008.12.014
A. အ Blaszczynski, အယ်လ် Nowerပြဿနာများနှင့်ရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်း၏ Apathways မော်ဒယ်
စွဲ, 97 (2002), စစ။ 487-499
Blum et al ။ , 2012
K. Blum, အီး Gardner, အမ်အော်စကာ Berman, အမ်ရွှေReward Deficiency Syndrome (RDS) နှင့်ဆက်စပ်သော“ Liking” နှင့်“ wanting” - ဦး နှောက်ဆုချခြင်းတွင်ကွဲပြားခြားနားသောတုန့်ပြန်မှုကိုတွက်ချက်ခြင်း
လက်ရှိဆေးဝါးဒီဇိုင်း, 18 (2012), စစ။ 113-138, 10.2174 / 138161212798919110
Blum et al ။ , 1996
K. Blum, PJ Sheridan, RC Wood က, ER Braverman, တီဂျေ Chen က JG Cull, DE လာဆုလာဘ်ချို့တဲ့ရောဂါ၏ပစ်မှတ်အဖြစ် D2 dopamine receptor မျိုးရိုးဗီဇ
ဆေးပညာ၏ Royal Society ၏ဂျာနယ်, 89 (1996), စစ။ 396-400
အမ်အမှတ်တံဆိပ်, ဂျေ Snagowski, C. Laier, အက်စ် Maderwaldပိုမိုနှစ်သက်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်သည်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းစွဲလက္ခဏာတွေဆက်နွယ်နေကြောင်းသောအခါ Ventral striatum လှုပ်ရှားမှု
Neuroimage, 129 (2016), စစ။ 224-232, 10.1016 / j.neuroimage.2016.01.033
အမ်အမှတ်တံဆိပ်, KS လူငယ်တို့, C. Laier, K. Wölfling, MN Potenzaတိကျတဲ့အင်တာနက်အသုံးပြုမှုကိုမမှန်များ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုနှင့် ပတ်သက်. ပေါင်းစပ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် neurobiological ထည့်သွင်းစဉ်းစား: ပုဂ္ဂိုလ်-အပေါ်ဘယ်လိုသက်ရောက်မှု-သိမှတ်ခံစားမှု-Executive (I-PACE) မော်ဒယ်တစ်ခု Interaction
neuroscience နှင့် Biobehavioral ပြန်သုံးသပ်ချက်များ, 71 (2016), စစ။ 252-266, 10.16 / j.neubiorev.2016.08.033
Carbonell et al ။ , 2018
X တို့မှာ Carbonell, အေ Chamarro, U. Oberst, ခရိုဒရီဂို, အမ် Pradesတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားကျောင်းသူများအတွက်အင်တာနက်နှင့်စမတ်ဖုန်းများ၏ပြဿနာကိုအသုံးပြုခြင်း: 2006-2017
ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးသုတေသနနှင့်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဂျာနယ်, 15 (2018), p ။ E475, 10.3390 / ijerph15030475
Carnes နှင့်မေတ္တာသည် 2017
အက်စ် Carnes, တီမတ်ေတာသညျမော်ဒယ်ခွဲထုတ်တဲ့ရောဂါအဖြစ်လိင်စွဲလမ်း၏သိပ္ပံနည်းကျကျောထောက်နောက်ခံပြုမိုက်စေသော
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏မော်ကွန်း, 46 (2017), စစ။ 2253-2256, 10.1007/s10508-017-1072-8
ချိန်ဘာလိန် et al ။ , 2018
SR Chamberlain, K. Ioannidis, je Grant ကပြဿနာကအင်တာနက်အသုံးပြုမှုအတွက် comorbid ထကြွလွယ်သော / compulsive မမှန်ခြင်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှု
အပြုအမူစွဲ,7(2018), စစ၏ဂျာနယ်၏။ 269-275, 10.1556 / 2006.7.2018.30
ချိန်ဘာလိန် et al ။ , 2016
SR Chamberlain, C. Lochner, DJ သမား Stein, AE Goudriaan, RJ ဗန် Holst, ဂျေဇော, je Grant ကအမူအကျင့်ဆိုင်ရာစွဲလမ်းမှု - ဒီရေတက်နေခြင်းလော။
ဥရောပ Neuropsychopharmacology, 26 (2016), စစ။ 841-855, 10.1016 / j.euroneuro.2015.08.013
ချိန်ဘာလိန် et al ။ , 2008
Chamberlain, အယ်လ် Menzies, အေ Hampshire ပြည်နယ်, ဂျေနို့စို့, NA Fineberg, N. del Campos, SR et al ။obsessive-compulsive ရောဂါနှင့်၎င်းတို့၏ထိခိုက်ဆွေမျိုးသားချင်းများနှင့်အတူလူနာအတွက် Orbitofrontal ကမောက်ကမဖြစ်မှု
သိပ္ပံ, 321 (2008), စစ။ 421-422, 10.1126 / science.1154433
Claes et al ။ , 2016
အယ်လ် Claes, အေ Muller, K. Luyckxဝိသေသလက္ခဏာအစားထိုးအဖြစ် compulsive ဝယ်များနှင့်သိုလှောင်: ရုပ်ဝါဒတန်ဖိုးကိုထောက်ခံချက်များနှင့်စိတ်ကျဝေဒနာ၏အခန်းကဏ္ဍ
ဘက်စုံစိတ်ရောဂါကုသမှု, 68 (2016), စစ။ 65-71, 10.1016 / j.comppsych.2016.04.005
Clark က et al ။ , 2013
အယ်လ် Clark က, ခ Averbeck, ဃအခွန်ဆောင်သူ, G. အ Sescousse,, CA Winstanley, G. အ Xueရောဂါဗေဒရွေးချယ်မှု: အဆိုပါလောင်းကစားဝိုင်း၏ neuroscience နှင့်လောင်းကစားစွဲ
အာရုံကြောသိပ္ပံ၏ဂျာနယ်, 33 (2013), စစ။ 17617-17623, 10.1523 / JNEUROSCI.3231-13.2013
del Pino-Gutierrez et al ။ , 2017
A. အ Del Pino-Gutierrez, အက်စ် Jimenez-Murcia, အက်ဖ် Fernandez-Aranda, Z. Agüera, R. Granero, အေ Hakansson, et al ။Impulse-related မမှန်အတွက်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးစရိုက်များ၏ဆက်စပ်မှု: ပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုမှုမမှန်ခြင်းနှင့်လောင်းကစားရောဂါ မှစ. bulimia nervosa မှ
အပြုအမူစွဲ,6(2017), စစ၏ဂျာနယ်၏။ 396-405, 10.1556 / 2006.6.2017.051
Deleuze et al ။ , 2017
ဂျေ Deleuze, အက်ဖ် Nuyens, အယ်လ် Rochat, အက်စ် Rothen, P. Maurage, ဂျေ Billieuxစွဲမြဲအန္တရာယ်အချက်များ DSM-5 အင်တာနက်ကိုဂိမ်းရောဂါလက်မှတ်ရေးထိုးထားသောကျန်းမာဂိမ်းကစားခြင်းနှင့်ဂိမ်းကစားအကြားခွဲခြားမှုရန်ပျက်ကွက်
အပြုအမူစွဲ,6(2017), စစ၏ဂျာနယ်၏။ 516-524, 10.1556 / 2006.6.2017.074
ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဒမ်စီ et al ။ , 2019
AE ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဒမ်စီ, KD O 'Brien, MF Tiamiyu, JD Elhai(FoMO) ထွက်ပျောက်ဆုံးနေတဲ့၏ကွောကျရှံ့ခွငျးနှင့်မွေးမြူရေးလူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်မှုနှင့်ပြဿနာရဲ့ Facebook အသုံးပြုမှုကိုအကြားဆက်ဆံရေးပြေလည်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးရန်
စွဲလမ်းစေအပြုအမူအစီရင်ခံစာများ,9(2019), အပိုဒ် 100150, 10.1016 / j.abrep.2018.100150
ဒေါင်းလုပ် PDF ဖိုင်ရယူရန်Google Scholar
Dieter et al ။ , 2017
ဂျေ Dieter, အက်စ် Hoffman ဟာ, ဃ Mier, ဗြဲ Reinhard, အမ် Beutel, အက်စ်Vollstädt-Klein, et al ။တိကျတဲ့အင်တာနက်စွဲလမ်းထဲမှာစိတ်ခံစားမှု inhibitory ထိန်းချုပ်မှု၏အခန်းကဏ္ဍကို - တစ်ဦး fMRI လေ့လာမှု
အမူအကျင့်ဦးနှောက်သုတေသန 324 (2017), စစ။ 1-14, 10.1016 / j.bbr.2017.01.046
dong နှင့် Potenza, 2014
G. အ Dong, MN Potenzaအင်တာနက်ကဂိမ်းရောဂါ၏တစ်ဦးကသိမြင်မှု-အပြုအမူမော်ဒယ်: သီအိုရီကျောထောက်နောက်ခံနဲ့လက်တွေ့သက်ရောက်မှု
စိတ်ရောဂါသုတေသန 58 (2014), စစ၏ဂျာနယ်၏။ 7-11, 10.1016 / j.jpsychires.2014.07.005
dong et al ။ , 2019
G. အ Dong, Z. ဝမ်, Y. ဝမ်, X တို့မှာဒူ, MN Potenzaတစ်ဦးမဖြစ်မနေချိုးစဉ်အတွင်းဂိမ်းနှင့်ချက်ချင်း abstinence စဉ်အတွင်းကျား-related functional ဖြစ်စေဆက်သွယ်မှုနဲ့တဏှာ: အင်တာနက်ဂိမ်းကစားရောဂါ၏ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့်တိုးတက်မှုများအတွက်အကျိုးသက်ရောက်မှု
Neuro-Psychopharmacology နှင့်ဟားဗတ်, 88 (2019), စစအတွက်တိုးတက်မှုကို။ 1-10, 10.1016 / j.pnpbp.2018.04.009
Dowling et al ။ , 2017
NA Dowling, အက်စ်အက်စ် Merkouris, CJ Greenwood, အီး Oldenhof, JW Toumbourou, GJ Youssefပြဿနာလောင်းကစားဝိုင်းအဘို့အအစောပိုင်းအန္တရာယ်နှင့်အကာအကွယ်အချက်များ: longitudinal လေ့လာမှုတစ်ခုစနစ်တကျပြန်လည်သုံးသပ်မှုနှင့် Meta-analysis သည်
လက်တွေ့စိတ်ပညာကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း, 51 (2017), စစ။ 109-124, 10.1016 / j.cpr.2016.10.008
Elhai et al ။ , 2018
JD Elhai, အမ် Tiamiyu, ဂျေသီတင်းပါတ်ပြဿနာစမတ်ဖုန်းအသုံးပြုမှုနှင့် ပတ်သက်. ကမ္ဘာ့စီးပွားပျက်ကပ်နှင့်လူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်: Ruminate ၏ထင်ရှားသောအခန်းကဏ္ဍ
အင်တာနက်ကသုတေသန 28 (2018), စစ။ 315-332, 10.1108 / IntR-01-2017-0019
Emelin et al ။ , 2017
Tkhostov AS VA သို့ Emelin, EI Rasskazova,စိတ်ကူးယဉ်ကိုယ်ထည်နယ်နိမိတ်၏နည်းပညာ-related အသွင်ပြောင်း: အနေ့တိုင်းအလွန်အကျွံအင်တာနက် Psychopathology နှင့်မိုဘိုင်းဖုန်းကိုအသုံးပြုမှု
ရုရှား၌စိတ်ပညာ: အအနုပညာပြည်နယ်, 10 (2017), စစ 177-189 ။ 10.11621 / pir.2017.0312
Ersche et al ။ , 2012
KD Ersche, PS ဂျုံးစ်, GB ကိုဝီလျံ, AJ Turton, TW Robbins, ET Bullmoreလှုံ့ဆော်မူးယစ်ဆေးစွဲများတွင်ပတ်သက်သည်ဟုယူဆရပုံမှန်မဟုတ်သောဦးနှောက်ဖွဲ့စည်းပုံ
သိပ္ပံ, 335 (2012), စစ။ 601-604, 10.1126 / science.1214463
BJ Everitt, TW Robbinsမူးယစ်ဆေးစွဲများအတွက်အားဖြည့်များ၏အာရုံကြောစနစ်များ: လုပ်ရပ်များမှသည်အလေ့အထမှ compulsion မှ
သဘာဝတရားအာရုံကြောသိပ္ပံ, 8 (2005), စစ။ 1481-1489, 10.1038 / nn1579
Everitt နှင့် Robbins, 2013
BJ Everitt, TW Robbinsမူးယစ်ဆေးစွဲ၎င်းတို့၏အခန်းကဏ္ဍများ Devolving အမြင်များ: အ ventral ထံမှ dorsal striatum မှ
neuroscience နှင့် Biobehavioral ပြန်သုံးသပ်ချက်များ, 37 (2013), စစ။ 1946-1954, 10.1016 / j.neubiorev.2013.02.010
BJ Everitt, TW Robbinsမူးယစ်ဆေးစွဲ: အပေါ်ဆယျနှစျ compulsions မှအလေ့အထများမှလုပ်ရပ်တွေကိုအသစ်ပြောင်းခြင်း
စိတ်ပညာ၏နှစ်ပတ်လည်ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း, 67 (2016), စစ။ 23-50, 10.1146 / annurev-psyche-122414-033457
အမ် Fauth-Bühler, K. မန်းအင်တာနက်ဂိမ်းကစားရောဂါ Neurobiological ဆက်စပ်မှု: ရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်းဆင်တူ
စွဲလမ်းစေအပြုအမူ, 64 (2017), စစ။ 349-356, 10.1016 / j.addbeh.2015.11.004
Fauth-Bühler et al ။ , 2017
အမ် Fauth-Bühler, K. မန်း, MN Potenzaရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်း: တစ်ခုစွဲလမ်းရောဂါအဖြစ်က၎င်း၏ခွဲခြားများအတွက် neurobiological သက်သေအထောက်အထားတစ်ခုပြန်လည်သုံးသပ်သက်ဆိုင်ရာ
စွဲဇီဝဗေဒ, 22 (2017), စစ။ 885-897, 10.1111 / adb.12378
Fineberg et al ။ , 2013
NA Fineberg, DS Baldwin, JM Menchon, ဃ Denis, အီးGrünblatt, အက်စ် Pallanti, et al ။compulsive-obsessive နဲ့ဆက်စပ်ရောဂါများသို့ဥရောပသုတေသနကွန်ယက်ကြေညာစာတမ်း
ဥရောပ Neuropsychopharmacology, 23 (2013), စစ။ 561-568, 10.1016 / j.euroneuro.2012.06.006
Fineberg et al ။ , 2018
NA Fineberg, Z. Demetrovics, DJ သမား Stein, K. Ioannidis, MN Potenza, အီးGrünblatt, et al ။အင်တာနက်ပြဿနာအသုံးပြုမှုသို့ဥရောပသုတေသနကွန်ယက်ကြေညာစာတမ်း
ဥရောပ Neuropsychopharmacology, 11 (2018), စစ။ 1232-1246, 10.1016 / j.euroneuro.2018.08.004
Gervasi et al ။ , 2017
လေး Gervasi, အယ်လ်, La Marca, အေ Costanzo, U. ခြေလှမ်း, အက်ဖ် Guglielmucci, အေ Schimmentiကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးနှင့်အင်တာနက်ဂိမ်းကစားဖရိုဖရဲ: မကြာသေးမီစာပေ၏တစ်ဦးကစနစ်တကျပြန်လည်သုံးသပ်မှု
လက်ရှိစွဲအစီရင်ခံစာများ,4(2017), စစ။ 293-307, 10.1007/s40429-017-0159-6
Gleich et al ။ , 2015
T. Gleich, အယ်လ် Deserno, RC Lorenz, R. Boehme, အေ Pankow, R. Buchert, et al ။Prefrontal နှင့် striatal အချိုမှုကွဲပြားခြားနား striatal dopamine ဆက်စပ်: striatal presynaptic dopamine function ကို၏အလားအလာစည်းမျဉ်းလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ?
အာရုံကြောသိပ္ပံ၏ဂျာနယ်, 35 (2015), စစ။ 9615-9621, 10.1523 / JNEUROSCI.0329-15.2015
Gola et al ။ , 2017
အမ် Gola, အမ် Wordecha, G. အ Sescousse, အမ် Lew-Starowicz, ခ Kossowski, အမ် Wypych, et al ။ညစ်ညမ်းစွဲလမ်းဖြစ်နိုင်သလား? ပြဿနာညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုအတွက်ကုသမှုရှာကြံယောက်ျားတစ်ဦး fMRI လေ့လာမှု
Neuropsychopharmacology, 42 (2017), စစ။ 2021-2031, 10.1038 / npp.2017.78
စတိန်းနှင့် Volkow, 2011
RZ စတိန်း, ND Volkowစွဲလမ်းအတွက် prefrontal cortex ၏ကမောက်ကမဖြစ်မှု: တွေ့ရှိချက်များနှင့်လက်တွေ့သက်ရောက်မှု Neuroimaging
သဘာဝတရားအာရုံကြောသိပ္ပံ, 12 (2011), စစ Reviews ။ 652-669, 10.1038 / nrn3119
Goudriaan et al ။ , 2004
AE Goudriaan, ဂျေ Oosterlaan, အီး Beurs, ဒဗလျူဗန်တွင်းချောက်ကမ်းပါးရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်း: biobehavioral တွေ့ရှိချက်များ၏ပြည့်စုံသောပြန်လည်သုံးသပ်
neuroscience နှင့် Biobehavioral ပြန်သုံးသပ်ချက်များ, 28 (2004), စစ။ 123-141, 10.1016 / j.neubiorev.2004.03.001
Goudriaan et al ။ , 2014
AE Goudriaan, အမ်Yücel, RJ ဗန် Holstပြဿနာလောင်းကစားဝိုင်းအပေါ်တစ်ဦးချုပ်ကိုင်ရယူခြင်း: အဘယ်အရာကျွန်တော်တို့ကိုပြောပြ neuroscience နိုင်မလဲ?
အပြုအမူဆိုင်ရာအာရုံကြောသိပ္ပံ, 8 (2014), p နယ်စပ်ဒေသ။ 141, 10.3389 / fnbeh.2014.00141
Hahn et al ။ , 2017
အီး Hahn, အမ် Reuters, FM ရေ Spinath, C. Montageအင်တာနက်စွဲနှင့်၎င်း၏ရှုထောငျ့: မျိုးရိုးဗီဇ၏အခန်းကဏ္ဍနှင့် Self-ညွှန်ကြားဖို့စပ်လျဉ်း
စွဲလမ်းစေအပြုအမူ, 65 (2017), စစ။ 137-146, 10.1016 / j.addbeh.2016.10.018
သူ et al ။ , 2017
မေးသူက O. Turel, အေ Becharaလူမှုကွန်ယက်အဖွဲ့ဆိုက်ကို (SNS) စွဲလမ်းနှင့်ဆက်စပ်ဦးနှောက်ခန္ဓာဗေဒကိုပြောင်းလဲ
သိပ္ပံနည်းကျအစီရင်ခံစာများ, 23 (7) (2017), p ။ 45064, 10.1038 / srep45064
Herman နှင့်ရောဘတ်, 2015
MA Herman, အမ်ရောဘတ်အဆိုပါစွဲဦးနှောက်: စွဲလမ်းမမှန်များ၏ neurophysiological ယန္တရားများကိုနားလည်ခြင်း
Integrated အာရုံကြောသိပ္ပံ,9(2015), p နယ်စပ်ဒေသ။ 18, 10.3389 / fnint.2015.00018
ဟို et al ။ , 2014
RC ဟို, MWB Zhang က, ty Tsang, AH Toh, အက်ဖ်ပန်, Y. လူး, K.-K. Makအင်တာနက်စွဲခြင်းနှင့်စိတ်ရောဂါပူးတွဲရောဂါအကြားအသင်းအဖွဲ့: Meta-analysis သည်
BMC စိတ်ရောဂါကုသမှု, 14 (2014), p ။ 183, 10.1186/1471-244X-14-183
Ioannidis et al ။ , 2019a
K. Ioannidis, R. Hook, AE Goudriaan, အက်စ် Vlies, NA Fineberg, je Grant က SR Chamberlainပြဿနာကအင်တာနက်အသုံးပြုမှုအတွက်သိမှုလိုငွေပြမှု: 40 လေ့လာမှု Meta-analysis သည်
စိတ်ရောဂါကုသမှု၏ဗြိတိသျှဂျာနယ် (2019), 10.1192 / bjp.2019.3
Ioannidis et al ။ , 2019b
K. Ioannidis, R. Hook, K. Wickham, je Grant က SR Chamberlainလောင်းကစားဝိုင်းရောဂါနှင့်ပြဿနာလောင်းကစားဝိုင်းအတွက် Impulse: Meta-analysis သည်
Isobe et al ။ , 2018
အမ် Isobe, SA လာခြင်း, NJ Keuthen, DJ သမား Stein, C. Lochner, je Grant က SR Chamberlaintrichotillomania အတွက် Striatal မူမမှန်: တစ်ဦးက Multi-site ကို MRI ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ
Neuroimmage: လက်တွေ့, 17 (2018), စစ 893-898 ။ 10.1016 / j.nicl.2017.12.031
Jeromin et al ။ , 2016
အက်ဖ် Jeromin, N. Nyenhuis, အေအခေါက်အလွန်အကျွံအင်တာနက်ကိုဂိမ်းကစားအတွက်အာရုံစူးစိုက်မှုဘက်လိုက်မှု: တစ်ခုစွဲ Stroop နှင့်အမြင်အာရုံစုံစမ်းစစ်ဆေးသုံးပြီးစမ်းသပ်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေ
အပြုအမူစွဲ,5(2016), စစ၏ဂျာနယ်၏။ 32-40
Kaess et al ။ , 2017
အမ် Kaess, P. Parzer, အယ်လ် Mehl, အယ်လ် Weil, အီး Strittmatter, အက်ဖ် Resch, ဂျေ Koenigအင်တာနက်ကဂိမ်း Disorder နှင့်အတူအထီးလူငယ်အတွက်စိတ်ဖိစီးမှုအားနည်းချက်
Psychoneuroendocrinology, 77 (2017), စစ။ 244-251, 10.1016 / j.psyneuen.2017.01.008
ဃ Kahnemanတစ်ဦးကတရားသဖြင့်စီရင်ခြင်းနှင့်ရှေးခယျြမှုအပေါ်ရှုထောင့်: မြေပုံကမ္ဘာ၏ကျိုးကြောင်းကာရံထားခြင်းခံရသည်
အမေရိကန်စိတ်ပညာရှင်, 58 (2003), စစ။ 697-720, 10.1037 / 0003-066X.58.9.697
Kayiş et al ။ , 2016
AR Kayiş, SA Satici, MF Yilmaz, ဃŞimşek, အီး Ceyhan, အက်ဖ်BakioğluBig ငါးကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးရိုနှင့်အင်တာနက်စွဲလမ်း: Meta-သရုပ်ခွဲပြန်လည်သုံးသပ်
လူ့အပြုအမူအတွက်ကွန်ပျူတာ, 63 (2016), စစ။ 35-40, 10.1016 / j.chb.2016.05.012
ရှငျဘုရငျ et al ။ , 2017
DL ဘုရင်, PH ကို Delfabbro, AMS ဝူ, YY ဒို, DJ သမား Kuss, အက်စ် Pallesen, et al ။နိုင်ငံတကာစနစ်တကျပြန်လည်သုံးသပ်မှုနှင့်ဖှဲ့အကဲဖြတ်: အင်တာနက်ကိုဂိမ်းရောဂါကုသမှု
လက်တွေ့စိတ်ပညာကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း, 54 (2017), စစ။ 123-133, 10.1016 / j.cpr.2017.04.002
Kircaburun နှင့် Griffiths က, 2018
K. Kircaburun, MD Griffiths ကInstagram ကိုစွဲလမ်းနှင့်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး၏ Big ငါးခု: Self-အကြိုက်၏ဖြန်ဖြေအခန်းကဏ္ဍ
အပြုအမူစွဲ,7(2018), စစ၏ဂျာနယ်၏။ 158-170, 10.1556 / 2006.7.2018.15
T. Klucken, အက်စ် Wehrum-Osinsky, ဂျေ Schweckendiek, O. Kruse, R. Starkပြောင်းလဲစာစားချင်စိတ်ကိုအေးစက်နှင့်အတင်းအကျပ်ပြုတတ်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့်အတူဘာသာရပ်များအတွက်အာရုံကြောဆက်သွယ်မှု
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆေးပညာဂျာနယ်, 13 (2016), စစ။ 627-636, 10.1016 / j.jsxm.2016.01.013
gf Koobစိတ်လှုပ်ရှားမှု၏အမှောင်ဘက်ခြမ်း: အဆိုပါစွဲရှုထောင့်
ဆေးဝါးဗေဒ, 753 ၏ဥရောပဂျာနယ် (2015), စစ။ 73-87, 10.1016 / j.ejphar.2014.11.044
gf Koob, ND Volkowစွဲလမ်း၏ Neurocircuitry
အနောက်တောင်ဘက်တွင် Kraus, V. Voon, MN Potenzaတစ်ခုစွဲထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ compulsive သငျ့သလော
စွဲ, 111 (2016), စစ။ 2097-2106, 10.1111 / add.13297
Kuss et al ။ , 2018
DJ သမား Kuss, HM ပိုတငျးက, MD Griffiths ကအင်တာနက်ကဂိမ်းရောဂါအတွက် Neurobiological ဆက်စပ်မှု: တစ်ဦးကစနစ်တကျစာပေပြန်လည်သုံးသပ်
စိတ်ရောဂါကုသမှု,9(2018), p နယ်စပ်ဒေသ။ 166, 10.3389 / fpsyt.2018.00166
Kyrios et al ။ , 2018
အမ် Kyrios, P. Trotzke, အယ်လ်လောရင့်, ဃ Fassnacht, K. အလီ, မိုင် Laskowski, အေ Mullerဝယ်-စျေးဝယ် Disorder ၏အပြုအမူဆိုင်ရာအာရုံကြောသိပ္ပံ: တစ်ဦးကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း
လက်ရှိအပြုအမူဆိုင်ရာအာရုံကြောသိပ္ပံအစီရင်ခံစာများ,5(2018), စစ။ 263-270, 10.1007/s40473-018-0165-6
Lachmann et al ။ , 2018
ခ Lachmann, C. Sindermann, RY Sariyska, R. Luo အဘိဓါန်, MC Melchers, ခ Becker က, et al ။အင်တာနက်နှင့်စမတ်ဖုန်းအသုံးပြုမှုရောဂါအတွက်စာနာမှုနှင့်ဘဝကျေနပ်မှု၏အခန်းကဏ္ဍကို
စိတ်ပညာအတွက်နယ်စပ်ဒေသ,9(2018), p ။ 398, 10.3389 / fpsyg.2018.00398
Laier နှင့်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်, 2017
C. Laier, အမ်အမှတ်တံဆိပ်အင်တာနက်ပေါ်ရှိညစ်ညမ်းစောင့်ကြည့်ပြီးနောက်စိတ်ဓါတ်များအပြောင်းအလဲများကိုအင်တာနက်ညစ်ညမ်း-ကြည့်ရောဂါဆီသို့ဦးတည်လိုတဲ့သဘောထားကိုနှင့်ဆက်စပ်နေပါသည်
စွဲလမ်းစေအပြုအမူအစီရင်ခံစာများ,5(2017), စစ။ 9-13, 10.1016 / j.abrep.2016.11.003
Laier et al ။ , 2018
C. Laier, အီး Wegmann, အမ်အမှတ်တံဆိပ်ဂိမ်းကစားအတွက်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးနှင့်အခြားသောကောင်းကျိုး: ရှောင်ရှားမျှော်လင့်ထားအင်တာနက်ဂိမ်းကစားရောဂါ maladaptive ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးစရိုက်များနှင့်ရောဂါလက္ခဏာအကြားဆက်ဆံရေးပြေလည်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးရန်
စိတ်ရောဂါကုသမှု,9(2018), စစအတွက်နယ်စပ်ဒေသ။ 1-8, 10.3389 / fpsyt.2018.00304
lam နှင့် lam, 2017
LT Lam, MK Lamတစ်နိုင်ငံစုံနမူနာအတွက်ဘဏ္ဍာရေးစာတတ်မြောက်ရေးနှင့်ပြဿနာကအင်တာနက်စျေးဝယ်အကြားအသင်းအဖွဲ့
စွဲလမ်းစေအပြုအမူအစီရင်ခံစာများ,6(2017), စစ။ 123-127, 10.1016 / j.abrep.2017.10.002
Lee က et al ။ , 2018a
ဃ Lee က, ဂျေ Lee က, K. Namkoong, YC Jungcomorbid စိတ်ကျရောဂါနှင့်အတူအင်တာနက်ကိုဂိမ်းရောဂါနှင့်အတူငယ်ရွယ်အထီးအတွက် anterior cingulate cortex ပုံစံကွဲပြား functional ဖြစ်စေဆက်သွယ်မှုပုံစံများငျဒသေ
စိတ်ရောဂါကုသမှု,9(2018), စစအတွက်နယ်စပ်ဒေသ။ 1-9, 10.3389 / fpsyt.2018.00380
Lee က et al ။ , 2018b
ဃ Lee က, K. Namkoong, ဂျေ Lee က, YC Jungအင်တာနက်ကဂိမ်းရောဂါနှင့်အတူငယ်ရွယ်လူကြီးများအတွက်မူမမှန်မီးခိုးရောင်ကိစ္စအသံအတိုးအကျယ်နှင့် Impulse
စွဲဇီဝဗေဒ, 23 (2018), စစ။ 1160-1167, 10.1111 / adb.12552
Lemenager et al ။ , 2016
T. Lemenager, ဂျေ Dieter, အိပ်ချ်ဟေးလ်, အက်စ် Hoffman ဟာ, ဗြဲ Reinhard, အမ် Beutel, et al ။ရောဂါဗေဒလူမှုကွန်ယက်အသုံးပြုသူများအများတွင်ရောဂါဗေဒအင်တာနက်ကိုဂိမ်းကစားအတွက်ကိုယ်ပွားဖော်ထုတ်ခြင်းနှင့် Self-ရောင်ပြန်ဟပ်မှု၏အာရုံကြောအခြေခံ Exploring
အပြုအမူစွဲ,5(2016), စစ၏ဂျာနယ်၏။ 485-499, 10.1556 / 2006.5.2016.048
လီ et al ။ , 2018
ဒဗလျူလီ, EL ပန်းကုံး, je O 'Brien, C. Tronnier, P. McGovern, B. Anthony, MO ကို Howardထွန်းသစ်စလူကြီးများအတွက်ဗီဒီယိုဂိမ်းစွဲလမ်းများအတွက်သတိ-oriented ပြန်လည်နာလန်ထူတိုးမြှင့်: အမှုအစီရင်ခံစာများကနေပဏာမတွေ့ရှိချက်
နိုင်ငံတကာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးနှင့်စွဲမှု၏ဂျာနယ်, 16 (2018), စစ။ 928-945, 10.1007/s11469-017-9765-8
Limbrick-Oldfield et al ။ , 2013
Eh Limbrick-Oldfield, RJ ဗန် Holst, အယ်လ် Clark ကမူးယစ်ဆေးစွဲခြင်းနှင့်ရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်းအတွက်နံရံပစ်ကစားနည်း-striatal dysregulation: ညီရှေ့နောက်မညီ?
Neuroimage,2(2013), လက်တွေ့စစ။ 385-393, 10.1016 / j.nicl.2013.02.005
DSS Loboလောင်းကစားဝိုင်းမမှန်၏မျိုးဗီဇသွင်ပြင်လက္ခဏာ: လတ်တလောဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုများနှင့်အနာဂတ်လမ်းညွန်
လက်ရှိအပြုအမူဆိုင်ရာအာရုံကြောသိပ္ပံအစီရင်ခံစာများ,3(2016), စစ။ 58-66, 10.1007/s40473-016-0064-7
Luijten et al ။ , 2017
အမ် Luijten, AF ပင်ဖြစ်သည်, အက်စ် Kuhn, မီဂါဝပ် Machielse, G. အ Sescousseစွဲလမ်းအတွက်ဆုလာဘ်အပြောင်းအလဲနဲ့၏နှောင့်အယှက်: အလုပ်လုပ်တဲ့သံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုပုံရိပ်လေ့လာမှုတစ်ခုက image ကို-based Meta-analysis သည်
ဂျေအေအမ်အေစိတ်ရောဂါကုသမှု, 74 (4) (2017), စစ။ 387-398, 10.1001 / jamapsychiatry.2016.3084
Männikkö et al ။ , 2017
N. Männikkö, အိပ်ချ် Ruotsalainen, ဂျေ Miettunen, HM ပိုတငျးက, အမ်Kääriäinenပြဿနာဂိမ်းကစားခြင်းအမူအကျင့်များနှင့်ကျန်းမာရေး-related ရလဒ်များ: တစ်ဦးကစနစ်တကျပြန်လည်သုံးသပ်မှုနှင့် Meta-analysis သည်
ကနျြးမာရေးစိတ်ပညာ၏ဂျာနယ် (2017), 10.1177 / 1359105317740414
Meng et al ။ , 2015
Y. Meng, ဒဗလျူ Deng, အိပ်ချ်ဝမ်, ဒဗလျူ Guo, တီလီအင်တာနက်ကဂိမ်းရောဂါနှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီအတွက် prefrontal ကမောက်ကမဖြစ်မှု: အလုပ်လုပ်တဲ့သံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုပုံရိပ်လေ့လာမှု Meta-analysis သည်
စွဲဇီဝဗေဒ, 20 (2015), စစ။ 799-808, 10.1111 / adb.12154
SA MitelmanPsychiatry အတွက် Transdiagnostic neuroimaging: တစ်ဦးကသုံးသပ်မှု
စိတ်ရောဂါကုသမှုသုတေသန (2019), 10.1016 / j.psychres.2019.01.026
Montage et al ။ , 2017
C. Montage, အေ Markowetz, K. Blaszkiewicz, ဗြဲ Andone, ခ Lachmann, R. Sariyska, et al ။စမတ်ဖုန်းများနှင့်နျူကလိယ accumbens ၏မီးခိုးရောင်ကိစ္စအသံအတိုးအကျယ်ပေါ်တွင် Facebook ကိုအသုံးပြုမှု
အမူအကျင့်ဦးနှောက်သုတေသန 329 (2017), စစ။ 221-228, 10.1016 / j.bbr.2017.04.035
Montage et al ။ , 2018
C. Montage, Z. Zhao နှင့် C. Sindermann, အယ်လ် Xu, အမ်ဖူ, ဂျေလီ, et al ။အင်တာနက်ဆက်သွယ်ရေး Disorder နဲ့လူ့ဦးနှောက်၏ဖွဲ့စည်းပုံ: WeChat စွဲအပေါ်ကနဦးအသိအမြင်
သိပ္ပံနည်းကျအစီရင်ခံစာများ, 8 (2018), စစ။ 1-10, 10.1038 / s41598-018-19904-y က
မောရစ် et al ။ , 2016
LS မောရစ်, P. Kundu, N. Dowel, DJ သမား Mechelmans, P. Favre, MA Irvine, et al ။နံရံပစ်ကစားနည်း-striatal အဖွဲ့အစည်းက: အမူအကျင့်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်၏အလုပ်လုပ်တဲ့နှင့် microstructural အလွှာ Defining
cortex, 74 (2016), စစ။ 118-133, 10.1016 / j.cortex.2015.11.004
Muller et al ။ , 2019
A. အ Muller, အမ်အမှတ်တံဆိပ်, အယ်လ် Claes, Z. Demetrovics, အမ်က de Zwaan, အက်ဖ် Fernandez-Aranda, et al ။ဝယ်-စျေးဝယ်ရောဂါ - ICD-11 အတွက်၎င်း၏ပါဝင်မှုကိုထောကျပံ့ဖို့လုံလောက်တဲ့သက်သေအထောက်အထားရှိပါသလား?
CNS spectrum (2019), စစ။ 1-6, 10.1017 / S1092852918001323
Muller et al ။ , 2014
A. အ Muller, အယ်လ် Claes, အီး Georgiadou, အမ်Möllenkamp, ​​EM Voth, RJ တေးဂီတဆိုင်ရာပံ့ပိုး, et al ။ရုပ်ဝါဒ, စိတ်ကျရောဂါသို့မဟုတ်စိတ်ထားမှဆက်စပ် compulsive ဝယ်ဖြစ်သနည်း သမဝါယမနှင့်အတူကုသမှု-ရှာကြံလူနာတစ်ဦးကိုနမူနာအနေဖြင့်တွေ့ရှိချက်
စိတ်ရောဂါကုသမှုသုတေသန 216 (2014), စစ။ 103-107, 10.1016 / j.psychres.2014.01.012
Naaijen et al ။ , 2015
ဂျေ Naaijen, DJ သမား Lythgoe, အိပ်ချ် Amiri, JK Buitelaar, JC Glennoncompulsive နှင့်ထကြွလွယ်သော syndrome အတွက်နံရံပစ်ကစားနည်း-striatal glutamatergic ဒြပ်ပေါင်းများ: သံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှု spectroscopy လေ့လာမှုတစ်ဦးကသုံးသပ်မှု
neuroscience နှင့် Biobehavioral ပြန်သုံးသပ်ချက်များ, 52 (2015), စစ။ 74-88, 10.1016 / j.neubiorev.2015.02.009
Namkung et al ။ , 2017
အိပ်ချ် Namkung, SH ကင်အေ Sawaအဆိုပါ insula: လက်တွေ့မှ neuroscience အတွက်တစ်ဦးလျှော့တွက်ဦးနှောက်ဧရိယာ, Psychiatry နှင့်အာရုံကြော
neuroscience, 40 (2017) တွင်ခေတ်ရေစီးကြောင်း, စစ။ 200-207, 10.1016 / j.tins.2017.02.002
နို et al ။ , 2006
X တို့မှာနို, အမ်ဗန် der Linden, အေ Becharaဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ခြင်း, ချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့ထိန်းချုပ်နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးများကိုတှနျးလှနျ willpower ဆုံးရှုံးမှု၏ neurocognitive ယန္တရားများ
စိတ်ရောဂါကုသမှု (Edgmont),3(2006), စစ။ 30-41
စိတ်ရောဂါကုသမှုနှင့်လက်တွေ့ Psychopharmacology, 28 (2018), စစ။ 91-96, 10.1080 / 24750573.2017.1407563
ပလောင်း et al ။ , 2017
အမ်ပလောင်း, EM Marron, R. Viejo-Sobera, ဃ Redolar-Ripollဗီဒီယိုကဂိမ်း၏အာရုံကြောအခြေခံ: တစ်ဦးကစနစ်တကျပြန်လည်သုံးသပ်မှု
လူ့အာရုံကြောသိပ္ပံ, 11 (2017), p နယ်စပ်ဒေသ။ 248, 10.3389 / fnhum.2017.00248
Pascoli et al ။ , 2018
V. Pascoli, အေ Hiver, R. ဗန် Zessen, အမ် Loureiro, R. Achargui, အမ် Harada, et al ။စွဲလမ်းတဲ့မော်ဒယ်အတွက်မလှူအခြေခံ Stochastic Synaptic plasticity
သဘာဝတရား, 564 (2018), စစ။ 366-371, 10.1038/s41586-018-0789-4
Paulus et al ။ , 2018
အက်ဖ်ဒဗလျူ Paulus, အက်စ် Ohmann, အေဗွန် Gontard, C. Popowကလေးများနှင့်ဆယ်ကျော်သက်များတွင်အင်တာနက်ကိုဂိမ်းရောဂါမြား: A စနစ်တကျပြန်လည်သုံးသပ်မှု
ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာဆေးပညာနှင့်ကလေး Neurology, 60 (2018), စစ။ 645-659, 10.1111 / dmcn.13754
Piazza နှင့် Deroche-Gamonet, 2013
PV Piazza, V. Deroche-Gamonetစွဲဖို့အကူးအပြောင်း၏တစ်ဦးက multistep ယေဘုယျသီအိုရီ
Psychopharmacology, 229 (2013), စစ။ 387-413
MN Potenzaလောင်းကစားဝိုင်းအပြုအမူတွေ၏ Neurobiology
Neurobiology, 23 (2013), စစအတွက်လက်ရှိထင်မြင်ချက်။ 660-667, 10.1016 / j.conb.2013.03.004
MN Potenzanonsubstance သို့မဟုတ်အပြုအမူစှဲခွငျးနှငျ့ ပတျသကျ. လက်တွေ့အာရုံကြောဆိုင်ရာစိတ်ရောဂါထည့်သွင်းစဉ်းစား
လက်တွေ့အာရုံကြောသိပ္ပံအတွက်ဆွေးနွေးမှုများကို, 19 (2017), စစ။ 281-291
MN Potenzaလောင်းကစားဝိုင်းရောဂါအတွက်ပုံတူပွား dopamine-related တွေ့ရှိချက်များကိုရှာဖွေနေ
ဟားဗတ်, 83 (2018), စစ။ 984-986, 10.1016 / j.biopsych.2018.04.011
Potenza et al ။ , 2018
MN Potenza, အက်စ် Higuchi, အမ်အမှတ်တံဆိပ်အမူအကျင့်စွဲလမ်းတဲ့ကျယ်ပြန့်အကွာအဝေးသို့သုတေသနအတွက် Call
သဘာဝတရား, 555 (2018), p ။ 30, 10.1038 / d41586-018-02568-z
Raab et al ။ , 2011
G. အ Raab, အီး Elger, အမ် Neuner, ခ Webercompulsive ဝယ်အပြုအမူများ၏အာရုံကြောလေ့လာမှု
စားသုံးသူပေါ်လစီ, 34 (2011), စစ၏ဂျာနယ်၏။ 401-413, 10.1007/s10603-011-9168-3
Robbins et al ။ , 2019
TW Robbins, MM Vaghi, P. BANCAobsessive-compulsive ရောဂါ: ပဟေဠိများနှင့်အလားအလာ
အာရုံခံဆဲလျ, 102 (2019), စစ။ 27-47, 10.1016 / j.neuron.2019.01.046
ရောဘတ် et al ။ , 2017
A. အ Roberts သည်, အက်စ် Sharman, ဂျေ Coid, R. Murphy, အိပ်ချ် Bowden-ဂျုံးစ်, အက်စ် Cowlishaw, ဂျေ Landonဗြိတိန်ယောက်ျားတစ်ဦးတစ်နိုင်ငံလုံးကိုယ်စားလှယ်နမူနာများတွင်လောင်းကစားခြင်းနှင့်အပျက်သဘောဘဝဖြစ်ရပ်များ
စွဲလမ်းစေအပြုအမူ, 75 (2017), စစ။ 95-102, 10.1016 / j.addbeh.2017.07.002
Robinson နဲ့ Berridge, 2008
TE ရော်ဘင်ဆင်, KC Berridgeစွဲလမ်းမှု၏မက်လုံးပေးာင်းသီအိုရီ: တချို့ကလက်ရှိပြဿနာများကို
တော်ဝင် Society က B, 363 (2008), စစ၏ဒဿနအရောင်းအဝယ်။ 3137-3146, 10.1098 / rstb.2008.0093
Rothen et al ။ , 2018
အက်စ် Rothen, JF Briefer, ဂျေ Deleuze, အယ်လ် Karila, CS Andreassen, အက်စ်အာဟပ်, et al ။ပြဿနာက Facebook အသုံးပြုအသုံးပြုသူများက '' ဦးစားပေးများနှင့် Impulse စရိုက်များ၏အခန်းကဏ္ဍကို Disentangling
PloS One ကို, 13 (2018), စစ။ 1-13, 10.1371 / journal.pone.0201971
Ryu et al ။ , 2018
အိပ်ချ် Ryu, JY Lee က, အေ Choi, အက်စ်ပန်းခြံ, DJ သမားကင်, JS Choiငယ်ရွယ်လူကြီးများအတွက် Impulse နှင့်အင်တာနက်ဂိမ်းကစားရောဂါအကြားဆက်ဆံရေး: လူ့ဆက်ဆံရေးနှင့်စိတ်ဓာတ်ကျခြင်း၏ဖြန်ဖြေဆိုးကျိုးများ
ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးသုတေသနနှင့်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဂျာနယ်, 15 (3) (2018), စစ။ 1-11, 10.3390 / ijerph15030458
Sariyska et al ။ , 2017
R. Sariyska, ခ Lachmann, အက်စ် Markett, အမ် Reuters, C. Montageကျား, မများ၏ထည့်သွင်းစဉ်းစားနှစ်အောက်အင်တာနက်စွဲနှင့်အင်တာနက်ဂိမ်း Disorder များ၏အခြေအနေတွင်သွယ်ဝိုက်သင်ယူမှုစွမ်းရည်နှင့်ထကြွလွယ်သောအပြုအမူအတွက်တစ်ဦးချင်းခြားနားချက်
စွဲလမ်းစေအပြုအမူအစီရင်ခံစာများ,5(2017), စစ။ 19-28, 10.1016 / j.abrep.2017.02.002
Schiebener နှင့်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်, 2015
ဂျေ Schiebener, အမ်အမှတ်တံဆိပ်ရည်မှန်းချက်အန္တရာယ်အခြေအနေများအောက်တွင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်း - သိမြင်မှုနှင့်စိတ်ခံစားမှုဆိုင်ရာဆက်စပ်မှုများပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း၊ မဟာဗျူဟာများ၊ တုံ့ပြန်ချက်ပြုပြင်ခြင်းနှင့်ပြင်ပလွှမ်းမိုးမှုများ
Neuropsychology ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း, 25 (2015), စစ။ 171-198
C. Schmidt က, LS မောရစ်, TL Kvamme, P. ခန်းမ, T. Birchard, V. Vooncompulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ: Prefrontal နှင့် limbic အသံအတိုးအကျယ်နှင့် interaction က
လူ့ဦးနှောက်ပုံထုတ်ခြင်း, 38 (2017), စစ။ 1182-1190, 10.1002 / hbm.23447
Schneider et al ။ , 2017
LA က Schneider, DL ဘုရင်, PH ကို Delfabbroဆယ်ကျော်သက်ပြဿနာကအင်တာနက်ဂိမ်းကစားအတွက်မိသားစုအချက်များ: တစ်ဦးကစနစ်တကျပြန်လည်သုံးသပ်မှု
အပြုအမူစွဲ,6(3) (2017), စစ၏ဂျာနယ်၏။ 321-333, 10.1556 / 2006.6.2017.035
Schneider et al ။ , 2018
LA က Schneider, DL ဘုရင်, PH ကို Delfabbroအင်တာနက်ကဂိမ်းရောဂါလက္ခဏာတွေနှင့်အတူဆယ်ကျော်သက်အတွက် Maladaptive ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းစတိုင်များ
စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးနှင့်စွဲမှု၏အင်တာနေရှင်နယ်ဂျာနယ်, 16 (4) (2018), စစ။ 905-916, 10.1007/s11469-017-9756-9
Starcevic နှင့် Khazaal, 2017
V. Starcevic, Y. Khazaalအမူအကျင့်စွဲလမ်းနှင့်စိတ်ရောဂါရောဂါအကြားဆက်ဆံရေးမျိုး: အဘယ်အရာကိုလူသိများသည်နှင့်သေးသောအရာကိုလေ့လာသင်ယူရမည်ဖြစ်ပါသည်
စိတ်ရောဂါကုသမှု, 8 (53) (2017) တွင်နယ်စပ်ဒေသ, 10.3389 / fpsyt.2017.00053
Starcke et al ။ , 2018
K. Starcke, အက်စ် Anton, P. Trotzke, အမ်အမှတ်တံဆိပ်အမူအကျင့်စွဲလမ်းအတွက် Cue-reactivity ကို: Meta-analysis သည်နှင့်အတိုင်းအတာများထည့်သွင်းစဉ်းစား
အပြုအမူစွဲ,7(2018), စစ၏ဂျာနယ်၏။ 227-238, 10.1556 / 2006.7.2018.39
Stark et al ။ , 2018
R. Stark, T. Klucken, MN Potenza, အမ်အမှတ်တံဆိပ်, ဂျေ Strahlerအတင်းအကျပ်ပြုတတ်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူရောဂါနှင့်ပြဿနာညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုများ၏အမူအကျင့်မှ neuroscience ၏တစ်ဦးကလက်ရှိနားလည်မှု
လက်ရှိအပြုအမူဆိုင်ရာအာရုံကြောသိပ္ပံအစီရင်ခံစာများ,5(2018), စစ။ 218-231, 10.1007/s40473-018-0162-9
Stark et al ။ , 2017
R. Stark, O. Kruse, အက်စ် Wehrum-Osinsky, ဂျေ Snagowski, အမ်အမှတ်တံဆိပ်, ခ Walter, T. Kluckenအင်တာနက်ကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပစ္စည်း (ပြဿနာ) ကိုအသုံးပြုခြင်းများအတွက်ခန့်မှန်း: လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရှင်းလင်းပြတ်သားစွာပစ္စည်းဆီသို့ရိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုများနှင့်သွယ်ဝိုက်ချဉ်းကပ်လိုတဲ့သဘောထားကို၏အခန်းက္ပ
လိင်စွဲခြင်းနှင့်ထိုးစစ်ဆင်ခြင်း၊ ၂၄ (၂၀၁၇)၊ စစ။ ၁၈၀-၂၀၂
Strack နှင့် Deutsch, 2004
အက်ဖ် Strack, R. Deutschလူမှုရေးအပြုအမူ၏ရောင်ပြန်နှင့်ထကြွလွယ်သောဆုံးအဖွတျ
ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးနှင့်လူမှုစိတ်ပညာကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း, 8 (2004), စစ။ 220-247, 10.1207 / s15327957pspr0803_1
Strahler et al ။ , 2018
ဂျေ Strahler, O. Kruse, အက်စ် Wehrum-Osinsky, T. Klucken, R. Starkလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုအားဖြင့်အာရုံထဲမှာကျားမကွဲပြားခြားနားမှုများ၏အာရုံကြောဆက်စပ်
Neuroimage, 176 (2018), စစ။ 499-509, 10.1016 / j.neuroimage.2018.04.072
Trotzke et al ။ , 2017
P. Trotzke, အမ်အမှတ်တံဆိပ်, K. Starckeရောဂါအားဝယ်ယူရန်အတွက် Cue-reactivity ကို, တဏှာနှင့်ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ခြင်း: တစ်ဦးကလက်ရှိအသိပညာ၏သုံးသပ်ချက်ကိုနှင့်အနာဂတ်လမ်းညွန်
လက်ရှိစွဲအစီရင်ခံစာများ,4(2017), စစ။ 246-253, 10.1007 / s40429-017-0155-x
Trotzke et al ။ , 2014
P. Trotzke, K. Starcke, အေ Pedersen, အမ်အမှတ်တံဆိပ်ရောဂါဗေဒဝယ်အတွက် Cue-သွေးဆောင်တဏှာ: ကိုလက်တွေ့သက်သေအထောက်အထားများနှင့်လက်တွေ့သက်ရောက်မှု
Psychosomatic Medicine, 76 (2014), စစ။ 694-700
Turel နှင့် Qahri-Saremi, 2016
O. Turel, အိပ်ချ် Qahri-Saremiလူမှုကွန်ယက်အဖွဲ့ဆိုဒ်များ၏ပြဿနာကိုအသုံးပြုခြင်း: တစ် dual-system ကိုသီအိုရီရှုထောင့်ကနေ Antecedents နှင့်အကျိုးဆက်
စီမံခန့်ခွဲမှုသတင်းအချက်အလက်စနစ်များ, 33 (2016), စစ၏ဂျာနယ်၏။ 1087-1116
ဗန်တွင်း Heuvel et al ။ , 2016
oa ဗန်တွင်း Heuvel, G. အဗန် Wingen, C. Soriano-Mas, P. Alonso, SR Chamberlain, T. Nakamae, et al ။compulsive ၏ဦးနှောက် circuitry
ဥရောပ Neuropsychopharmacology, 26 (2016), စစ။ 810-827, 10.1016 / j.euroneuro.2015.12.005
ဗန် Holst et al ။ , 2010
RJ ဗန် Holst, ဒဗလျူဗန်တွင်းချောက်ကမ်းပါး, DJ သမား Veltman, AE Goudriaanရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်းအတွက်သိမြင်မှုနှင့်အ neuroimaging တွေ့ရှိချက်များ၏တစ်ဦးကပြန်လည်သုံးသပ်: လောင်းကစားသမားတွေအနိုင်ရရန်ပျက်ကွက်အဘယ်ကြောင့်
neuroscience နှင့် Biobehavioral ပြန်သုံးသပ်ချက်များ, 34 (2010), စစ။ 87-107, 10.1016 / j.neubiorev.2009.07.007
ဗန် Timmeren et al ။ , 2018
တီဗန် Timmeren, JG Daams, RJ ဗန် Holst, AE Goudriaanလောင်းကစားဝိုင်းရောဂါအတွက် compulsive-related neurocognitive စွမ်းဆောင်ရည်လိုငွေပြမှု: တစ်ဦးကစနစ်တကျပြန်လည်သုံးသပ်မှုနှင့် Meta-analysis သည်
neuroscience နှင့် Biobehavioral ပြန်သုံးသပ်ချက်များ, 84 (2018), စစ။ 204-217, 10.1016 / j.neubiorev.2017.11.022
Vargas et al ။ , 2019
T. Vargas, ဂျေ Maloney, T. Gupta, KSF Damme, NJ ကယ်လီ, VA သို့မစ်တယ်လ်ပြဿနာကအင်တာနက်အသုံးပြုမှုနှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီအတွက်ဆုလာဘ် sensitivity ကို, တားစီးနှင့်ချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့ထိန်းချုပ်ရှုထောငျ့တိုင်းတာခြင်း
စိတ်ရောဂါကုသမှုသုတေသန 275 (2019), စစ။ 351-358, 10.1016 / j.psychres.2019.03.032
Vogel et al ။ , 2018
Vogel, ဗြဲ Kollei, T. Duka, ဂျေ Snagowski, အမ်အမှတ်တံဆိပ်, အေ Muller, အက်စ် Loeber V.Pavlovian-to-ဆာလွှဲပြောင်း: အသစ်ပါရာဒိုင်း Internet application များအသုံးပြုခြင်းနှင့် ပတ်သက်. ရောဂါဗေဒယန္တရားများအကဲဖြတ်ရန်
အမူအကျင့်ဦးနှောက်သုတေသန 347 (2018), စစ။ 8-16, 10.1016 / j.bbr.2018.03.009
Volkow နှင့် Baler, 2015
အဲန်ဒီ Volkow, RD BalerNOW က vs နောက်ပိုင်းမှာဦးနှောက်ဆားကစ်: အဝလွန်နှင့်စွဲလမ်းများအတွက်အကျိုးသက်ရောက်မှု
neuroscience, 38 (2015) တွင်ခေတ်ရေစီးကြောင်း, စစ။ 345-352, 10.1016 / j.tins.2015.04.002
Volkow et al ။ , 2016
McLellan ကို AT Volkow, gf Koob, NDစွဲလမ်း၏ဦးနှောက်ရောဂါမော်ဒယ်ကနေ Neurobiologic တိုးတက်လာ
ဆေးပညာ၏နယူးအင်္ဂလန်ဂျာနယ်, 374 (2016), စစ။ 363-371, 10.1056 / NEJMra1511480
Volkow နှင့် Morales, 2015
အဲန်ဒီ Volkow, အမ် Moralesမူးယစ်ဆေးဝါးများအပေါ်ဦးနှောက်: ဆုလာဘ် မှစ. စွဲရန်
cell, 162 (2015), စစ။ 712-725, 10.1016 / j.cell.2015.07.046
Volkow et al ။ , 2012
Volkow, GJ ဝမ်, JS မုဆိုး, ဃ Tomasi NDလူ့ဦးနှောက်ထဲမှာစွဲ circuitry
ဆေးဝါးဗေဒနှင့်ဝိသဗေဒ၏နှစ်ပတ်လည်ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း, 52 (2012), စစ။ 321-336, 10.1146 / annurev-pharmtox-010611-134625
Volkow et al ။ , 2013
Volkow, GJ ဝမ်, ဃ Tomasi, RD Baler NDစွဲလမ်းအတွက်သည်ညီမျှမှုအာရုံခံဆားကစ်
Neurobiology, 23 (2013), စစအတွက်လက်ရှိထင်မြင်ချက်။ 639-648, 10.1016 / j.conb.2013.01.002
V. Voon, တီဘီမှဲ့, P. BANCA, အယ်လ်ပေါ်တာအယ်လ်မောရစ်, အက်စ် Mitchell က, et al ။နှင့်အတင်းအကျပ်ပြုတတ်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေမပါဘဲတစ်ဦးချင်းစီအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ cue reactivity ကို၏အာရုံကြောဆက်စပ်
PloS One ကို,9(2014), အပိုဒ် e102419, 10.1371 / journal.pone.0102419
Wegmann et al ။ , 2018a
အီး Wegmann, အက်စ် Mueller, အက်စ် Ostendorf, အမ်အမှတ်တံဆိပ်neuroimaging လေ့လာမှုများစဉ်းစားတဲ့အခါမှာနောက်ထပ်အင်တာနက်အသုံးပြုမှုကိုရောဂါအဖြစ်အင်တာနက်ဆက်သွယ်ရေးရောဂါမီးမောင်းထိုးပြ
လက်ရှိအပြုအမူဆိုင်ရာအာရုံကြောသိပ္ပံအစီရင်ခံစာများ,5(2018), စစ။ 295-301, 10.1007/s40473-018-0164-7
Wegmann et al ။ , 2018b
အီး Wegmann, အက်စ် Ostendorf, အမ်အမှတ်တံဆိပ်ပျင်းကနေထွက်ပြေးလာသူများအတွက်အင်တာနက်ဆက်သွယ်ရေးကိုအသုံးဖို့အကျိုးရှိလား? ပျင်းကျရောက်နေတဲ့အင်တာနက်ဆက်သွယ်ရေးရောဂါ၏လက္ခဏာများကိုရှင်းပြအတွက် cue-သွေးဆောင်တဏှာနှင့်ရှောင်ရှားခြင်းမျှော်လင့်ထားနှင့်အတူအပြန်အလှန်ဆက်သွယ်
PloS One ကို, 13 (4) (2018), အပိုဒ် e0195742, 10.1371 / journal.pone.0195742
ဝေ et al ။ , 2017
အယ်လ်ဝေ, အက်စ် Zhang က O. Turel, အေ Bechara, ဆိုးကျိုးသူအင်တာနက်ကဂိမ်း Disorder တစ်ပွင့်ဆိုင် neurocognitive မော်ဒယ်
စိတ်ရောဂါကုသမှု, 8 (285) (2017) တွင်နယ်စပ်ဒေသ, 10.3389 / fpsyt.2017.00285
လေး Weinsteinအင်တာနက်ကဂိမ်းရောဂါ၏ဦးနှောက်ပုံရိပ်လေ့လာမှုများတခုတခုအပေါ်မှာ update ကိုခြုံငုံသုံးသပ်ချက်
စိတ်ရောဂါကုသမှု, 8 (2017), p နယ်စပ်ဒေသ။ 185, 10.3389 / fpsyt.2017.00185
Weinstein et al ။ , 2017
လေး Weinstein, အေ Livny, အေ Weizmanအင်တာနက်ကဦးနှောက်သုတေသနနှင့်ဂိမ်းကစားခြင်းရောဂါအသစ်ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှု
neuroscience နှင့် Biobehavioral ပြန်သုံးသပ်ချက်များ, 75 (2017), စစ။ 314-330, 10.1016 / j.neubiorev.2017.01.040
Wéry et al ။ , 2018
A. အWéry, ဂျေ Deleuze, N. တှငျ Canale, ဂျေ Billieuxစိတ်လှုပ်ရှားမှုဝန်ကိုထမ်းရွက် Impulse ယောက်ျားတွင်အွန်လိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှု၏စွဲလမ်းအသုံးပြုခြင်းကိုခန့်မှန်းအတွက်အကျိုးသက်ရောက်စေနှင့်အတူအပြန်အလှန်ဆက်သွယ်
ဘက်စုံစိတ်ရောဂါကုသမှု, 80 (2018), စစ။ 192-201, 10.1016 / j.comppsych.2017.10.004
Wilcox et al ။ , 2016
အီး Wilcox, JM Pommy, ခ Adinoffပစ္စည်းဥစ္စာကိုအသုံးပြုခြင်းမမှန်အတွက်ချို့ယွင်းစိတ်လှုပ်ရှားမှုစည်းမျဉ်းများ၏အာရုံကြော circuitry
စိတ်ရောဂါကုသမှု, 173 (2016) ၏အမေရိကန်ဂျာနယ်, စစ။ 344-361, 10.1176 / appi.ajp.2015.15060710
Xuan et al ။ , 2017
Y.-H. Xuan, အက်စ်လီ, R. Tao ကဂျေ Chen က L.-L. Rao က, XT ဝမ်, R. Zhengလောင်းကစားဝိုင်းအပေါ်မျိုးရိုးဗီဇနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်လွှမ်းမိုးမှု: အမွှာလေ့လာမှု Meta-analysis သည်
စိတ်ပညာအတွက်နယ်စပ်ဒေသ, 8 (2017), 10.3389 / fpsyg.2017.02121
Yao အဘိဓါန် et al ။ , 2017
YW Yao အဘိဓါန်, အယ်လ်လျူ, အက်စ်အက်စ်မာရင်းကျိုသည် XH ရှီ, N. Zhou, JT Zhang က, MN Potenzaအင်တာနက်ကဂိမ်းရောဂါအတွက် functional နှင့်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာအာရုံကြောကိုပြောင်းလဲ: တစ်ဦးကစနစ်တကျပြန်လည်သုံးသပ်မှုနှင့် Meta-analysis သည်
neuroscience နှင့် Biobehavioral ပြန်သုံးသပ်ချက်များ, 83 (2017), စစ။ 313-324, 10.1016 / j.neubiorev.2017.10.029
yip et al ။ , 2019
အနောက်တောင်ဘက်တွင် yip, ဃ Scheinost, MN Potenza, KM ကာရိုးကိုကင်း abstinence ၏ Connectome-based ခန့်မှန်း
စိတ်ရောဂါကုသမှု၏အမေရိကန်ဂျာနယ် (2019), 10.1176 / appi.ajp.2018.17101147
zhou et al ။ , 2018a
အက်ဖ် Zhou, K. Zimmermann, အက်ဖ် Xin, ဃ Scheele, ဒဗလျူ Dau, အမ်အို, et al ။ဆေးခြောက်-မှီခိုယောက်ျားအတွက်တိုကျရိုကျဆုလာဘ်များနှင့်စည်းမျဉ်းဒေသများနှင့်အတူ ventral striatal ဆက်သွယ်ရေးနှိုင်းယှဉ် dorsal ၏ပြောင်းလဲချိန်ခွင်လျှာ
လူ့ဦးနှောက်ပုံထုတ်ခြင်း, 39 (2018), စစ။ 5062-5073, 10.1002 / hbm.24345
zhou et al ။ , 2018b
N. Zhou, အိပ်ချ် Cao, X တို့မှာလီ, ဂျေ Zhang က, Y. Yao အဘိဓါန်, X တို့မှာ Geng, et al ။အင်တာနက်စွဲ, ပြဿနာအင်တာနက်အသုံးပြုမှု, တရုတ်ဆယ်ကျော်သက်အကြား nonproblematic အင်တာနက်အသုံးပြုမှု: တစ်ဦးချင်း, မိဘ, သက်တူရွယ်တူများနှင့် sociodemographic ဆက်စပ်မှု
ကိုစှဲအပြုအမူ, 32 (2018), စစ။ 365-372 ၏စိတ်ပညာ 10.1037 / adb0000358
zhou et al ။ , 2019
X တို့မှာ Zhou, K. Zimmermann, အက်ဖ် Xin, R. Derck, အေ Sassmannshausen, ဃ Scheele, et al ။အဆိုပါ dorsal striatum အတွက် reactivity ကိုမှီခိုအသုံးပြုခြင်းကို mediates သော်လည်းအဆိုပါ ventral striatum အတွက် Cue-reactivity ကို, မိုးသည်းထန်စွာဆေးခြောက်သုံးစွဲခြင်းရိုကျလက်ခဏာဖွစျတဲ့
Zilberman et al ။ , 2019
N. Zilberman, အမ် Lavidor, G. အ Yadid, Y. Rassovskyအရည်အသွေးပြန်လည်သုံးသပ်နှင့်အရေအတွက်အကျိုးသက်ရောက်မှုအရွယ်အစား cue-reactivity ကိုစွဲလေ့လာမှုများအားဖြင့်ဖော်ထုတ်ဦးနှောက်ဒေသများတွင် Meta-လေ့လာဆန်းစစ်
Neuropsychology, 33 (2019), စစ။ 319-334, 10.1037 / neu0000526
ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း။ PubMed PMID: 30816782
Zilberman et al ။ , 2018
N. Zilberman, G. အ Yadid, Y. Efratim, Y. Neumark, Y. Rassovskyကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးပစ္စည်းဥစ္စာ၏ profile များကိုများနှင့်အမူအကျင့်စှဲ
စွဲလမ်းစေအပြုအမူ, 82 (2018), စစ။ 174-181, 10.1016 / j.addbeh.2018.03.007
EPub 2018 မတ်လ6။ PubMed PMID: 29547799
© 2019 အာဏာပိုင်တွေ။ Elsevier, Ltd. ထုတ်ဝေသည်